at 07:12 1 comments
at 09:11 1 comments
အရက်မူးလာပြီဆိုရင် `မွေးမေကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ်လေ´လို့ အသံဝါကြီးနဲ့ အော်အော်ဆိုတတ်တဲ့ ကိုဘကောင်း တစ်ယောက် လေဖြတ်သွားပြီလေ။ ကိုဘကောင်းကို ပတ်ဝန်းကျင်က မတွေ့ကြတာ သုံးလေးရက်ရှိပြီ။ အရင်ကလည်း ရုံးသွားလိုက် တစ်ခါတစ်ခါ ရုံးမှာအိပ်လိုက် သူငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာ လိုက်အိပ်လိုက်ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က သတိမထားမိတာလည်း မဆန်းဘူးရယ်။
အဲဒီနေ့ကတော့ ကိုဘကောင်း မိဘတွေနဲ့ ကျေးဇူးမကင်းတဲ့ မသန်းဝင်းဆီကို ကိုဘကောင်း ၀ိညာဉ်လွင့်သွားတယ် ပြောရမှာပဲ။
`ဟဲ့ ချစ်စမ်းမောင် ထစမ်း ထစမ်း၊ ကိုကောင်းရယ် ငါ့ကို လာခေါ်နေတာ´
`မိသန်းဝင်း မိုးတောင် မလင်းသေးဘူး။ အိမ်မက်ယောင်တာလား´
`မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး။ ဗိုက်ထဲအောင့်တောင့်တောင့် ရှိတာနဲ့ နိုးနေတာ ကြာပြီ။ ခြံဝက လှမ်းခေါ်လို့ ငါသွားကြည့်တာ မရှိဘူး။ လင်းရင်တော့ အိမ်သွားကြည့်လိုက်ဦး။ အိမ်မှာမရှိရင် ရုံးလိုက်သွား။ ဆရာမကြီးတို့လည်း ရှိတာမဟုတ်ဘူး´
ရွှေနှင်းဆီ ဆေးလိပ်ကို ထောင်းထောင်းထ ဖွာနေတဲ့ မသန်းဝင်းက တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ တွေးနေ မိတယ်တဲ့။ ချစ်စမ်းမောင်လည်း မနက်လင်းတာနဲ့ ထမင်းကြမ်းခဲလေး ပဲပြုတ်နဲ့နယ်၊ ကပျာကသီစားပြီး အိမ်သွားကြည့်တယ်။
အိမ်က သော့ခတ်ထားတော့ ရုံးလိုက်ရှာတယ်။ ရုံးကလူတွေကလည်း ဂရုစိုက်ပုံများ ပြောပါတယ်။ ဘယ်သွားမှန်းလဲမသိဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကိုဘကောင်းသွားတတ်တဲ့ နေရာတွေ၊ ဘုံဆိုင်ပါ မကျန်ပေါ့။ ချစ်စမ်းမောင်က လိုက်ရှာတယ်။ ဘယ်မှာမှ မတွေ့ဘူး။ ကိုဘကောင်းဆိုတဲ့ ကိုဘကောင်းက ခပ်ရွတ်ရွတ်။ ရုံးမှာ အိုတီ ဆင်းရမယ်ဆိုလည်း ဘယ်တော့မှ မဆင်းဘူး။ အိုတီမပြောနဲ့ သာမန်ရုံးချိန်မှာကိုပဲ သူတက်ချင်မှ တက်တာ။ ရုံးက အရာရှိကလည်း သူ့အမေရဲ့ တပည့်ဖြစ်တာရယ်၊ ကိုဘကောင်းနမတွေ မျက်နှာနဲ့ ကိုဘကောင်း ဘာလုပ်လုပ် ဘာမှ မပြောဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ သိပ်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဆိုရင်တော့ အိမ်ကို လိုက်ခေါ်တတ်တယ်။ အဲလိုဆိုရင် ကိုဘကောင်းက နှစ်ဆောင်ပြိုင် အိမ်ကြီးကို အိမ်ရှေ့တံခါးသာ့ ခတ်ပြီး နောက်ပေါက်က ၀င်ထွက်လုပ်တာ။
ကိုဘကောင်း အကျင့်ကို သိတဲ့ ချစ်စမ်းမောင်က အိမ်ကို ပြန်သွားပြီး အိမ်နောက်ပေါက်က တံခါးခါက် တယ်။ ဘာသံမှ မကြားရတော့ အိမ်ပတ်ပတ်လည် လျှောက်နားထောင်ရင်း အိမ်ထဲက ညည်းသံသဲ့သဲ့ကို ကြားရတော့တာပဲ။ အဲဒီမှာတင် ရပ်ကွက်လူကြီး အိမ်ပြေး၊ ရပ်ကွက်လူကြီးကလည်း အိမ်ချင်းကပ်လျက် ပဲကိုး။
ဘေးအိမ်တွေပါ အကူအညီတောင်းပြီး တံခါးဖျက်ဝင်တော့ ကိုဘကောင်းကို ခွေခွေကလေး လဲနေတာ တွေ့ရတော့တာပဲ။ ဒွာရကိုးပေါက် စလုံးက ထွက်ထားတဲ့ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ပုပ်ဟောင်နေ တဲ့ ကိုဘကောင်းကို တွေ့လိုက်တာနဲ့…
`အမလေး… ကယ်ကြပါဦးဗျာ။ ကျွန်တော့်အစ်ကိုတော့ သေပါပြီ။ အမလေး… လုပ်ကြပါဦးဗျာ´
အမေပေးနာမည် စမ်းမောင်ကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် `ချစ်´တစ်လုံး တိုးထားတဲ့ ချစ်စမ်းမောင် ကလည်း ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင် ပဲက ခပ်များများရယ်။ ပျာယာခတ် ခုန်ပေါက်နေတဲ့ ချစ်စမ်းမောင်ကို ဖယ်ပြီး ကိုဘကောင်းကို အ၀တ်လဲပေး၊ ချက်ချင်း ဆေးရုံပို့ကြတယ်။
တိုက်နယ်ဆေးရုံကလေးကနေ ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးကို ဒရစ်ပိုက် ချိတ်ပြီး ပြောင်းတော့လည်း သတိ မရ၊ ဆေးရုံရောက်ပြီး သုံးရက်လောက်နေမှ သတိရလာတယ်တဲ့။ ကိုဘကောင်း သတိရလာတော့ ဘာကိုမှ သတိမရတော့ဘူး။ သမီးတွေနဲ့ လိုက်နေတဲ့ အမေပြန်လာတော့ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ ကြည့်နေတဲ့ ကိုဘကောင်းကို ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး တွေ့ရတော့တာပဲ။ နာရီဝက် တစ်နာရီ နောက်ကျရင် အသက်ဆုံးပြီလို့ ဆိုတဲ့ ကိုဘကောင်း စကားမပြောနိုင်တော့ဘူး။ ညာဘက် တစ်ခြမ်း မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။
`မွေးမေကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ်လေ´လို့ ဆိုတတ်တဲ့ ကိုဘကောင်း သူ့အမေရဲ့ လက်ပေါ်မှာ ဒုတိယမ္ပိ ကလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။
အမေက ကိုဘကောင်းကို ထမင်းခွံ့ကျွေးတယ်။ ရေတိုက်တယ်။ လက်ဖက် ရည်တိုက် တယ်။ ဆေးတိုက်တယ်။ ဆေးလိမ်းပေးတယ်။ လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးတယ်။ နောက် အငြိမ်း စား ကျောင်းဆရာမကြီး အမေက ကိုဘကောင်းကို စာရေးသင်ပေးတယ်။ စာဖတ်သင်လို့ မရတော့ ဘူး။ ကိုဘကောင်းက စကားမှ မပြောနိုင်ဘဲကိုး။
ဆေးရုံက ဆင်းပြီးတော့ အိမ်မှာ ဆက်ကုတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့လည်း ကုတယ်။ မြန်မာဆေးနဲ့လည်း ကုတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကိုဘကောင်း နာလံထလာတယ်။ အရင်က ဝေေ၀၀ါးဝါး ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ် လာပြီ။ ထုံထုံမှိုင်းမှိုင်း ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ကြည်ကြည်လင်လင် ဖြစ်လာပြီ။
စကားပြောချင်ဇောနဲ့ ပြောတော့ `ကျွန်တော်´ တဲ့။ `ဆေး´တဲ့။ သူပြောတတ်တဲ့ စကားလေ။
အဲဒါပဲ ပြောတတ်တော့ ဘာကိုပဲ ပြောချင် ပြောချင် `ကျွန်တော်၊ ဆေး´ ပဲ။
အသံကို နိမ့်မြင့် ပြောင်းလဲပြောတတ်တယ်။ ဆေးရုံမှာတုန်းက `ကျွန်တော်။ ဆေး´ ဆိုတော့ ဂျူတီကျတဲ့ ဆရာမလေးက
`ဆေး… တိုက်မယ်၊ တိုက်မယ်´ တဲ့။
ဆေးတောင်းတယ် မှတ်နေတာလေ။ နောက်သုံးလလောက် ကြာတော့ စကားတစ်ခွန်းတိုးလာတယ်။ `စေတော့၊ စေတော့´တဲ့။ သူပြောချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ရှင်းပြတယ်။
ဘာအကြောင်းအရာကိုပဲ ပြောပြော ပါးစပ်က `ကျွန်တော်၊ ဆေး၊ စေတော့´ ဒါပဲ ပြောတတ်တော့တယ်။
သူ ဒေါသထွက်ပြီဆိုရင် လေဖြတ်လို့ ရွဲ့နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ ပိုရွဲ့သွားအောင် မဲ့… မဲ့ပြီး
`စေ…ဒေါ့´ `စေ.. ဒေါ့´ နဲ့ အားရပါးရ အော်တော့တာပဲ။
လေဖြတ်တဲ့ လူတွေက စိတ်တိုတတ်လာတယ်။ ဒါကို မိဘ၊ မောင်နှမတွေက သည်းခံပါတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က နှစ်သိမ့်ဖျောင်းဖျတဲ့ စကားတွေပေါ့။ ငြိမ်းချမ်း အေးမြလွန်းတဲ့ အမေနဲ့ နားပူမခံနိုင်တဲ့ ညီမတွေက ထွေထူးပြီး သည်းခံစရာမလိုအောင် သည်းခံတတ်ကြပြီးသား။
အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ ဖြစ်ရလေဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ သနားစိတ်၊ သွေးရင်းသားရင်း၊ အစ်ကိုရင်း တစ်ယောက် အပေါ် ထုလိုက် ထည်လိုက် ထားတဲ့ မေတ္တာ၊ ငွေကြေးဆိုတာ ကိုယ်အလိုရှိရာ ပစ္စည်းတွေအတွက် လဲလှယ်စရာ ကြားခံပစ္စည်းလောက် သဘောထား သတ်မှတ်ကြတဲ့ ညီမတွေက ကိုဘကောင်းကို ငွေအကုန်ခံပြီး ကုတယ်။ မငြိုငြင်ဘူး။ မငြူစူဘူး။ အနှမြော အတွန့်တို မရှိဘူး။ ကိုယ့်ငွေ သူ့ငွေ မခွဲခြားဘူး။ တရုတ်အပ်စိုက်ဆိုလည်း စိုက်လိုက်တာပဲ။ အကြောပြင်ဆိုလည်း ပြင်လိုက်တာပဲ။ အနှိပ်သည်ဆိုလည်း နှိပ်လိုက်တာပဲ။ ဓာတ်မှန်ရိုက်တာ၊ သွေးစစ်တာ၊ CT scan ရိုက်တာတွေကတော့ ရိုးနေပေါ့။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော အထူးကုကိုပဲ နှစ်ယောက်တပြိုင်တည်း ပြတာ။ အယူဆအမျိုးမျိုး ကို သိချင်လို့တဲ့။
ကိုဘကောင်းဆိုတာ အဲဒီလို မိသားစုထဲမှာ ရှင်သန်နေတာလေ။ ကိုဘကောင်းကို ရိုင်းတယ်လို့ပြောရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ရယ်ကြမှာ။ ကိုယ့်အိမ်ကလွဲရင် ကိုဘကောင်းက လူကောင်း၊ လူယဉ်ကျေး လူလိမ္မာ။ ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ မရဘူး။ အိမ်ထောင်ပျက် မိသားစုရဲ့ အကြီးဆုံး သားဘ၀မှာ အိမ်ကို မငဲ့ဘူး။ အမေကို မငဲ့ဘူး။ ကိုဘကောင်းရဲ့ အဘွားဆိုရင် ဆုံးသာသွားရော ကိုဘကောင်းလုပ်စာ တစ်ပြားမှ မစားလိုက်ရဘူး။
အမေက မနက်ပိုင်း ကျူရှင်သင်၊ နေ့လည်ပိုင်း ကျောင်းသွား၊ ပြန်လာရင် ညနေပိုင်း ကျူရှင်သင်။ ကျောင်း နဲ့ ကျူရှင်ကြားမှာ နားချိန်မရှိဘူး။
ကိုဘကောင်းတို့ မောင်နှမတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတာက ကိုဘကောင်းတို့ အဘွားလေ။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အရွယ်ရောက် ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကိုဘကောင်းတို့ မောင်နှမတွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် အမေက ကျူရှင်တွေ တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန် တိုးပြရင်း ကိုဘကောင်းတို့ မောင်နှမတွေကို ဂရုစိုက်ချိန် နည်းလာခဲ့တယ်။ အရွယ်ရလာတဲ့ ကိုဘကောင်းက အမေ့စကားလည်း နားမထောင်ဘူး။ အဘွားစကားလည်းး နားမထောင်ဘူး။
မိဘတွေအိမ်ထောင်ပျက်တဲ့ ဒဏ်က ကိုဘကောင်းရင်ထဲအထိ ၀င်သွားတယ်။ သူတို့မောင်နှမတွေ ဒီလိုဒုက္ခခံရတာ မိဘတွေ အိမ်ထောင်ကွဲလို့ သူတို့အပြစ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ ခံယူချက်က ကိုဘကောင်းရဲ့ ကာဗာဖြစ်လာတယ်။ မီးလောင်ရာ လေပင့်လို့ ပြောရလောက်အောင် ကိုဘကောင်း ဖတ်တဲ့ အပြင်စာတွေ က ကွန်မြူနစ်စာအုပ်တွေလေ။
စာရွေးဖတ်ရမယ့် အရွယ်မှာ ကိုဘကောင်းကို ညွှန်ပြမယ့်လူ မရှိဘူး။ လမ်းညွှန်မယ့်သူ မရှိဘူး။ ကိုယ်ခံစိတ်ဓာတ် ညံ့ဖျင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် `မီးလောင်ရာ လေပင့်´ ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပေါ့။ စာတွေဆွဲခေါ်တဲ့နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားတော့တာ။ အဆင်မပြေတဲ့ မိသားစုထဲက ကိုဘကောင်း၊ သူဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေက ကွန်မြူနစ်စာအုပ်..။
အဲသလိုနဲ့ ကျောင်းပြဌာန်းစာအုပ်တွေနဲ့ ဝေးလာတယ်။ ဆယ်တန်းကျတယ်။ သူ့အတွေးအခေါ်တွေကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ အယူအဆတွေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်။ အမေနဲ့အဘွား ဆုံးမစကားကို နားမထောင်တော့ဘူး။
`ကျုပ်တို့က ခင်ဗျားတို့ ခေါ်လာလို့ လူ့လောကထဲကို ရောက်လာတာ´တဲ့။
`ကျုပ်တို့မှာ အပြစ်မရှိဘူး´ တဲ့။
အမေနဲ့ အဘွားက ကိုဘကောင်းရဲ့ ခင်ဗျားလုံးရိုက်ချက်အောက်မှာ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်ပေါ့။ နောက်တော့ ကိုဘကောင်း အဝေးကြီးကို ထွက်သွားတယ်။ အမေ အဘွားနဲ့ ညီမလေးတွေကို ထားခဲ့ပြီးတော့လေ။ အဝေးရောက် ကိုဘကောင်းရဲ့ သတင်းတွေထဲမှာ အရက်က ပင်တိုင် ဇာတ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။
ဂျူတီပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ အရက်သောက် ဂစ်တာတီး မွေးမေကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ်လေ ဆိုပြီး ငိုတော့တာပဲတဲ့။ ဖြစ်ပုံများ ပြောပါတယ်။
သီချင်းကလည်း ခေါင်းစဉ်သာပြောင်းသွားမယ်။ အကြောင်းအရာကတော့ အမေပဲ။ ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့ ကိုဘကောင်းက ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အမေ၊ ခင်ဝမ်းရဲ့အမေ…. အမေကို အရက်နဲ့မြည်းရင်း ပါးစပ်က ကျေးဇူးဆပ်နေခဲ့တာ ၇နှစ်လောက် ကြာသွားတယ်။
ကိုဘကောင်းတို့ မြို့ကလေးမှာ ရုံးခွဲလာဖွင့်တော့ မြို့ခံဆိုပြီး လူကြီးတွေက ကိုဘကောင်းကို သူ့မြို့ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ကိုဘကောင်း အမေနဲ့ အဘွားကိုလည်း ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေရဲ့ စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်။
ကိုဘကောင်းက အချိုးမှ မပြင်ဘဲကိုး။ ရုံးကပေးတဲ့ လိုင်းခန်းမှာ မနေဘူး။ အိမ်မှာပဲ နေတယ်။ ညဆိုရင် အရက်မူးပြီး ပြန်လာတယ်။ အိပ်နေတဲ့ အမေကို နှိုးပြီး ထမင်းခူးကျွေးခိုင်းတယ်။ သူရတဲ့ လခကလည်း သူသောက်တာနဲ့ ကုန်တာပဲ။
ကိုဘကောင်း ထွက်သွားတဲ့ နှစ်တွေအတွင်းမှာ ကိုဘကောင်း ညီမတွေက အသီးအနှံတွေ ပွဲစားလုပ်ရင်းက အခု ပွဲရုံလုပ်ငန်း အောင်မြင်နေပြီ။ အမေနဲ့ အဘွားကို စိတ်တိုင်းကျ ပြုစုနိုင်ပြီ။ ကိုဘကောင်း လခ မတောင်းရုံတင်မကဘူး ကိုဘကောင်းအတွက် အ၀တ်အစား မုန့်ဖိုးတောင် ညီမတွေက ပေးလိုက်သေးတယ်။ အမေ အဘွားနဲ့ ညီမ နှစ်ယောက်နေတဲ့ အိမ်က ကိုဘကောင်း ပြန်လာမှ ဆူညံလာတော့တယ်။ အရက်မူးလာရင် ထမင်းခူးပေးရုံတင်မကဘူး ကိုဘကောင်း စားတာ ဘေးက ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်ရသေးတယ်။ ကိုဘကောင်း ရစ်သမျှ ခံပေတော့။
`အဲဒီကောင်တွေ လူပါးဝတာ ဘကောင်းအကြောင်း သိမယ်´ စကားတစ်ခွန်းကို ထပ်တလဲလဲပြော၊ ထမင်းစားမပြီးမချင်း စားပြီးတော့လည်း မအိပ်မချင်း တစ်နေ့လည်းမဟုတ် ညတိုင်း။ ပြောလည်း မပြောရဲဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှက်လို့လေ။ ကိုဘကောင်းကတော့ `ဘာလို့ မွေးထားသေးလဲ´ ပြန်ပြောမှာ သိနေတာကိုး။ နောက် ညီမတွေ လုပ်တဲ့ ပွဲရုံလုပ်ငန်းမှာ ၀င်စွက်ဖက် ပထမပိုင်းတော့ ညီမတွေကလည်း ပွဲရုံလုပ်ငန်းမှာ အစ်ကိုကြီး ယောက်ျားသားရှိရင် ကောင်းတယ်ဆိုပြီး အလုပ်ထွက်ခိုင်းမလို့။ နောက်တော့ ကိုဘကောင်း ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြတော့ဘူး။
ပွဲရုံလာတဲ့ ကုန်သည်နဲ့ အရက်သောက် မူးရင် ရန်ဖြစ် အလုပ်သမားနဲ့ဖြစ် ညီမအကြီးနဲ့ ရန်ဖြစ် ညီမအငယ်နဲ့ ရန်ဖြစ် အမေ့ကို နှိပ်စက် အဘွားကို နှိပ်စက်။ အဲဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေကုန်သွားတယ်။ ကိုဘကောင်း အဘွားဆုံးသွားတယ်။ ညီမတွေကလည်း ပွဲရုံလုပ်ငန်းကို မန္တလေးရွှေ့ သွားတယ်။ ကိုဘကောင်း ဒဏ်မခံနိုင်တဲ့ အမေက ကိုဘကောင်းကို အိမ်တစ်လုံးနဲ့ ပစ်ထားခဲ့ပြီး ညီမတွေနောက် လိုက်သွားတယ်။
အဲဒီမှာ ကိုဘကောင်းအရက်တွေ နေ့ရော ညရောသောက် သွေးတိုးရှိမှန်းလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မသိ။ ဘယ်သူမှ မသိဘဲ အိမ်ထဲမှာ သုံးရက်လောက်လဲနေပြီး ဒီအဆင့်ကို ရောက်လာတော့တာပဲ။ အခုဆိုရင် လူကောင်းတစ်ယောက်လောက် နီးနီး ကောင်းနေပြီ။ စကားမပြောနိုင်တာက လွဲပြီးပေါ့။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဂစ်တာအတီးကောင်း သီချင်းအဆိုကောင်းတဲ့ ကိုဘကောင်းကို ညီမတွေက နားကြပ်ကက်ဆက် ၀ယ်ပေးတယ်။ ကာရာအိုကေ ၀ယ်ပေးထားတယ်။ စက်ဖွင့်နည်း တစ်ခါပဲ သင်ရတယ်။ မွေးမေကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ်လေတို့ အမေ့ရဲ့ ဒုက္ခအိုးလေးတို့ အော်တော့တာပဲ။ ကိုဘကောင်း ၀ဋ်ကြီးပုံများ ပြောပါတယ်။ ခင်မောင်တိုး သီချင်းများဆိုနေရင် မသိတဲ့လူက လူကောင်းပဲ ထင်တာ။
ပြောပြရင် အံ့သြတကြီးတွေ ဖြစ်လို့။ အကြောင်းသိ ဓာတ်သိတွေကတော့ `၀ဇီဗေဒ ထိတိုင်းရှ´ ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ။ အမေ အဘွားကို ခင်ဗျားချင်းထပ်အောင် အော်ခဲ့တာတွေလေလို့ မှတ်ချက်ချတတ်ကြတယ်။ သူပြောချင်တာလည်း ပြောမရဘူး။ သူလိုချင်တာလည်း တောင်းမရဘူး။ သူလုပ်ချင်တာလည်း တစ်ဖက်လူ နားလည်အောင် မပြောနိုင်ဘူး။ ဘယ်လက်နဲ့ စာရေးပြီး ပြောရအောင်လည်း စကားလုံးတွေ စာလုံးတွေကို သတိမရတော့ဘူး။ ပြောမရလေ ဒေါသအကြီးအကျယ် ထွက်လေပဲ။
အဲ… သူ သတိရတဲ့ အထဲမှာ မိဘဆိုတာ အစစအရာရာမှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူ သားသမီးက ဖန်တီးခံဘ၀ မတတ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးကိုတော့ မှတ်မှတ်သားသားကြီးကို သတိရနေတာ။ ကျန်တာသာ မေ့ချင်မေ့မှာ။ လူကောင်း ပကတိ ဘ၀တုန်းကတောင် အမေကို တန်ဖိုးထားရမှန်း မသိတဲ့ ကိုဘကောင်းက လူမမာဘ၀မှာ ပိုဆိုးနေတော့တယ်။ စိတ်တိုင်းမကျတိုင်း အော်နေတော့တာပဲ။ ငြိမ်းချမ်းအေးမြလွန်းတဲ့ အမေက တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်မရှည်လို့ ဆူပြီဆိုရင် ကိုဘကောင်းက ကောင်းတဲ့လက်နဲ့ ဗိုက်ရှေ့ကို ၀ိုက်ပြတယ်။ ပြီးတော့ လက်ကို ရှေ့တိုး တိုးပြတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း…
`စေတော့… စေတော့… စေတော့… စေတော့… စေတော့´ ဆိုတာကို နိမ့်မြင့်တိုးကျယ် ရွတ်ပြတယ်။ သဘောကတော့ ဗိုက်တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတယ်ပေါ့။ ကောင်းတုန်းက ပြောခဲ့သလို
`မွေးထားရင် ကျွေးထားရမှာပဲ´ ပေါ့။ အခု ကိုဘကောင်း စကားမပြောနိုင် ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေ လူစဉ်မမီ ဖြစ်နေတော့ကော နောင်တရမယ် ထင်သလား။ ကိုဘကောင်းကတော့ အေးဆေးပဲ။ အမေကဆေးကုပေး ထမင်း လက်ဖက်ရည် အချိန်မှန်ကျွေး ရေချိုးတာက အစ အမေပါမှ။
ညီမတွေကကော ဆေးကုလို့ ကုန်ကျစရိတ် မှန်သမျှ မညည်းမညူပေး ကိုဘကောင်း လေဖြတ်တဲ့ အဖြစ်မှာ ပင်ပန်းတာက အမေနဲ့ ညီမတွေ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မစာနာတဲ့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်တဲ့ အတ္တသမား ကိုဘကောင်းက အရက်သောက်တုန်း။ ဘယ်သူကမှ အရက်ဝယ်မပေးတော့ သူကိုယ်တိုင် ဘုံဆိုင်သွားတယ်။ ကောင်းတဲ့လက်နဲ့ မကောင်းတဲ့ ခြေလက်တွေကို စုန်ဆန်သပ်ပြပြီး….
`ကျွန်တော်…. ဆေး´ တဲ့။
ဘုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်း သြော်.. ဆေးဖော်ဖို့ လာဝယ်တာပဲပေါ့လေ။ အဲသလို ဥာဏ်များတဲ့ ကိုဘကောင်းပါ။
အခုအချိန်မှာ ကိုဘကောင်း ခန္ဓကိုယ်က အရက်ကို လက်မခံတော့ဘူး။ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တာ။ သောက်ပြီးရင် မကြာဘူး တက်တာပဲ။ တက်ပြီဟေ့ဆိုရင် ရပ်နေရာက ဗိုင်းခနဲ လဲသွားတာ။ အဲလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း ပြေးပေဦးတော့ ဆေးရုံကို။
မိုးကလေးများ အေးလာပြီဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အရက်သမား ပေါင်းဟောင်း သင်းဟောင်းကလေးတွေကများ အရက်သောက်ပြီး သတင်းမေး လာခဲ့ပြီဆိုရင် ကိုဘကောင်း ဖောက်ဖောက်လာတာပဲ။
`မင်းက ခွေးလိုကောင်၊ အနံ့ကလေး ရတာနဲ့ ပျာယာခတ်နေတော့တာ´ ဘယ်လိုပဲ နာအောင် ပြောပြော ကိုဘကောင်းက မမှုတော့ဘူး။
`လေဖြတ်တဲ့လူဆိုတာ သွေးကြောပိတ်လို့ ဖြတ်တာ။ သွေးလေညီညွတ်အောင် အရက်ကလေးနည်း နည်းဖြစ်ဖြစ် သောက်ပေး ရတယ်´
အဲဒီလိုများ အချွန်နဲ့ မတဲ့ လူမမာ သတင်းမေးတွေ လာပြီဆိုရင် မျက်လုံးကြီးပြူးလို့ `အေးအေး´ ဆိုပြီး ၀မ်းခေါင်းသံကြီးနြ့ ၀မ်းသာအားရ ထောက်ခံတော့တာပဲ။
မိုးတွေရွာတဲ့ တစ်နေ့ ရာသီဥတုကလည်း ကိုဘကောင်းဘက် ပါတဲ့နေ့မျိုးပေါ့။ ညနေပိုင်းလောက်ကတည်းက သောက်တဲ့အရက် ညဦးပိုင်းအထိ မနားတမ်းပဲ။
ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ အမေကို ခေါ်ပြီး အရက်နဲ့ မြည်းသေးတာ။ ကောင်းတဲ့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဗိုက်ရှေ့ဝိုင်းပြ အမေ့မျက်နှာရှေ့ လက်ညှိုးတထောင်ထောင်နဲ့ ပါးစပ်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း `စေတော့… စေတော့… စေတော့… စေတော့… စေတော့´ ပေါ့။
အမေမွေးလာလို့ သူ ဒုက္ခရောက်ရတယ်ပေါ့လေ။
သူသောက်လို့ ၀တော့ အိပ်ရာထဲဝင် အမေက စောင်ခြုံ ခြင်ထောင်ချ မီးမှိတ်ပေးပြီးမှ သူ့အခန်းထဲ က ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ မိုးကလည်း သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာတုန်း။ ခြံထောင့် အိမ်သာရှေ့မှာ ကွေးကွေးကလေး လဲနေတဲ့ ကိုဘကောင်းကို တွေ့ရတော့တာပဲ။ လက်တွေကလည်း ကောက်ကွေးတွန့်လိမ်လို့။ ပါးစပ်က အမြှုပ်တွေ ထနေလိုက်တာ မြင်မကောင်း၊ ရှုမကောင်း။ အသားတွေ အေးစက်နေတဲ့ ကိုဘကောင်းကို ဆေးရုံအမြန် ပို့လိုက်ကြတယ်။
အခုတော့ မွေးမေကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ်လေလို့လည်း မအော်နိုင်တော့ဘူး။ ဗိုက်ရှေ့လည်း လက်နဲ့ ၀ိုင်းဝိုင်း မပြနိုင်တော့ဘူး။
`မင်းငယ်ငယ်တုန်းက အမေမြှူလို့များ မင်းက ရယ်ရယ်ပြရင် အမေ့မှာ ၀မ်းသာလွန်းလို့၊ ပျော်လွန်းလို့၊ မင်းမျက်နှာပဲ ထိုင်ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်။ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်း မသိဘူး။ မင်းအဘွားကဆို `မခင်အေး ရူးပုံကတော့ လွန်ပါတယ်´ နဲ့ ခဏ ခဏပြောတာ။ သုံးလသားလောက်နဲ့ သိတတ်လွန်းလို့ လူဝင်စားလား ထင်ခဲ့မိတယ်။
အမေကများ `ဘယ်သူလဲ ဘယ်ကလာသလဲ´ မေးရင် မင်းက ပြန်ပြီး ၀ူးဝါးနဲ့ ပြောသေးတာ။
အခုအမေမေးရင် မင်းမဖြေနိုင်တော့ဘူး။ `ဘယ်သွားမလဲ အခု မင်းဘယ်သွားမလဲ ဖြေပါဦး သားကြီးရယ်´ အမေကတော့ `ဘယ်သွားမလဲ´ လို့ တတွတ်တွတ်မေးရင်း သားအလိမ္မာတုံးကြီးအတွက် ငိုလို့ကောင်းတုန်းပေါ့။
ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇
`ရေနံတွင်း မီးလောင်လို့´ ဆိုတဲ့စကား အုတ်ဖို၊ ၀ဲလောင်၊ ရှောက်ပင်၊ တဲယာ…. ရွာစဉ်တစ်လျှောက် ဟိုးဟိုးကျော်နေပြီ။ မြောက်လေနဲ့ပါလာတဲ့ စကားသံတွေက တောင်လေနဲ့အတူ…. တောင်လေနဲ့အတူ ပါလာတဲ့ စကားသံတွေက မြောက်လေနဲ့အတူ… အဲလို……… အဲလို ပျံ့နှံ့နေလိုက်တာ ရေနံချောင်းက ရေနံတွင်းမီးလောင်တဲ့ သတင်းက ကျုပ်တို့ တောင်သာနယ်၊ အုတ်ဖိုရွာအထိ ရောက်လာတော့တာပဲ။
ကျုပ်တို့ရွာတင်ပဲလား…. တစ်နယ်လုံးလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ သတင်းကြားတာနဲ့တင် အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် စိတ်ဝင်စားနေလိုက်ကြတာ..။ ထန်းတောထဲက ထန်းပင်အောက်လည်း ဒီစကား ဒီအကြောင်း၊ ဆင်တဲဝချောင်းထဲက စိုက်ခင်းတွေပေါ်လည်း ဒီစကား.. ဒီအကြောင်း၊ ယာခင်းထဲတွေမှာလည်း ဒီစကား ဒီအကြောင်း၊ ချောင်းထဲက လက်ယက်တွင်းတွေမှာလည်း ဒီစကား ဒီအကြောင်း၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အုတ်ဖို၊ ရှောက်ပင်၊ တဲယာ ရွာသုံးရွာက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေပါ စုရပ်ဖြစ်ကုန်ရော…
သံဃာ၊ ဗိုလ်ပါအကုန် စိတ်ဝင်စားမယ် ဆိုတာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲလေ…။ အင်္ဂလိပ်မင်းများကိုယ်တိုင်က ရေနံတွင်း `မီးငြှိမ်းနိုင်တဲ့သူကို ဆုပေးမယ် မီးငြှိမ်းနိုင်သူမျာ ကြွရောက်ကြပါ´ ကြေညာထားတာကိုး။
သတင်းကြားနာသူ တောသူတောင်သားတို့ရဲ့ သဘာဝ……… သတင်းကို နားစွင့်မယ်၊ မသေချာဘူးထင်ရင် ပိုသိတဲ့လူကို လက်တို့မေးမယ်။ ဖောက်သည်ချမယ်။ ဒီထက် ပိုကဲလာရင် ကိုယ်ထင်ရာ မြင်ရာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး စုံကန်ငြင်းကြမယ်။ ဒီလောက်ပဲ မှုတ်လား ကြာလှ… တစ်ရက် နှစ်ရက်ပေါ့။
ဒီလောက်နဲ့ မကတဲ့သူက ကိုရင်တိုက်စည်း။ ကိုရင်တိုက်စည်းက နားထောင်ရုံ၊ ပြန်ဖောက်သည်ချရုံ၊ ငြင်းရုံနဲ့ ကျေနပ်တဲ့ လူစားမဟုတ်ဘူး။ ဒီပြဿနာကို အဖြေရှာမယ်ဆိုပြီး အဖြေရှာတော့တာပဲ။ နဂိုကတည်းက `လက်ညှိုးထောင်.. ခေါင်းညိတ်… ဟုတ်ကဲ့…. ထောက်ခံ´ လူစားတွေထက် နှာတစ်ဖျားမက သာတဲ့လူဆိုတော့လည်း သတင်းပေးရုံ သတင်းယူရုံနဲ့ အားမရတော့ဘူး… ကိုယ်တိုင် ၀င်လှုပ်ရှားချင်တော့တာပေါ့။
တစ်ခါတုန်းက ရွာထဲကို အင်္ဂလိပ်တွေရယ်…….. စကားပြန်လုပ်တဲ့သူရယ် လာကြပါရောလား။ အဲဒီတုန်းက ကိုရင်တိုက်စည်းက ကိုရင်ဝတ်ကြီးနဲ့ပေါ့။ ဟိုးရှေးရှေးဇာတ်က ဘုရားတွေ အကြောင်း သိချင်ကြလို့တဲ့။ ကျောင်းသားလေး လွှတ်ခေါ်ခိုင်းလို့ သူကြီးနဲ့ ရွာထဲက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဘုန်းကြီးကြောင်းလိုက်သွားကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ အင်္ဂလိပ်တွေက စက္ကူချပ်အကြီးကြီးကို ဖြန့်ကြည့်လို့… ဘေးမှာက ဆရာတော်ရယ်၊ ဆရာတော်ရဲ့ လက်စွဲ ကိုရင်တိုက်စည်းရယ်ပေါ့။ သူကြီးတို့အဖွဲ့လည်း ရောက်ရော အင်္ဂလိပ်ကြီးက စက္ကူချပ်ကြီးထဲ လက်ညှိုးနဲ့ ထောက်… ထောက်ပြီး အသံသြသြကြီးနဲ့…
`မောင်မင်းတို့ရွာကလေး ဒီမှာ ရှိတာကို ဒီမရောက်ခင် အင်္ဂလန်မှာကတည်းက ကြိုသိတယ်´ တဲ့။
အင်္ဂလိပ်ကြီးရဲ့ လျှာလိပ်အာလိပ် မြန်မာစကားပြောသံကို အထူးအဆန်းဖြစ်နေတဲ့ ရွာသားတွေ ငြိမ်နေတုန်း ကိုရင်တိုက်စည်းက …
`ကျုပ်တို့ကလည်း ဒကာကြီးတို့နဲ့ ဒီလိုနေရာ ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီလိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာကို ဟိုးအရင်ကတည်းက သိတယ်´
အင်္ဂလိပ်ကြီးက မျက်လုံးပြူးသွားပြီး တဟားဟား အော်ရယ်ပါလေရော။ ပြီးတော့ သူနဲ့ ပါလာတဲ့သူတွေကို ဘာပြောတယ် မသိဘူး အားလုံးဝိုင်းရယ်ကြပြီးမှ စကားပြန်က
`မဟုတ်ဘူးဗျ မင်းကြီးက မြေပုံထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ရွာ ပေါ်နေတယ်… မြေပုံကိုကြည့်ပြီး ဒီကိုလာတာ… ဒီဘုရားကြီးနဲ့ ပတ်သက်တာ ခင်ဗျားတို့ သိသမျှ ပြောပြပါလို့ ပြောချင်တာ´
ဆိုတော့မှ ကိုရင်တိုက်စည်း ငြိမ်ကျသွားတာ၊ ရွာထဲမှာတော့ စကားအတင် မခံတတ်တဲ့ ကိုရင်တိုက်စည်း အကြောင်းက ရယ်စရာကို ဖြစ်လို့ပေါ့။
ကိုရင်တိုက်စည်းက ကိုရင်လူထွက်ပီပီ နှံ့စပ်တယ်။ ရွာဦးကျောင်းက ဆရာတော်နဲ့ မန်းလေး(မန္တလေး)ထိ ရောက်ထူးတာကိုက ရွာထဲက လူတွေထက် ပိုသာတယ် ပြောရမှာပေါ့။ တောရွာသဘာဝ သွားရေးလာရေး ခက်ခဲကြတာ တောင်သာမြို့ပေါ်တောင် ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြား မရောက်ဖူးကြတဲ့ တောရွာမှာ မန်းလေးထိ ရောက်ဖူးတဲ့ ကိုရင်တိုက်စည်းက လူစွာဖြစ်နေတာပေါ့… နောက် ကိုရင်တိုက်စည်းက အပြောကောင်း၊ အဟောကောင်း၊ ဥပမာ. ဥပမေယျကလေးတွေနဲ့များ ပြောလိုက်ရင် ကျုပ်တို့တောရွာကလေးက လူတွေမှာ မဟုတ်နိုးနိုး ဟုတ်နိုးနိုး ယောင်ပေါင် ခေါင်းညိတ်ရတော့တာ။ အခုလည်း ကြည့်လေ…
`ဒီမယ်ကိုရင်တို့ ရေနံတွန်း(တွင်း)ဆိုတော့ ရွာလယ်ဘကြီးခက် ရေတွန်းထက်တော့ သေး မဖြစ်ဘူး… အဲဒီတော့ ငတို့ လူအင်အား များများတောင်းမှ ရမယ်၊ လူအားနဲ့ဆို ရမှာပဲ… အဓိကက လူညီပြီး ကိုယ့်တောင်မြောက် ကိုယ်တည့်ဖို့ လိုတာပဲ… ကိုရင်တို့ ကျုပ်စကားသာ နားထောင် ကျုပ်အကြံအောင်စေရမယ်… အကြံများအောင်လိုက်လို့ကတော့ မန်းလေးက မဟာမုနိဖူးပြီးမှ ရွာပြန်မယ်၊ ကိုရင်တို့အားလုံး မန်းလေးမှာ ဘုရားဖူး အင်္ဂလိပ်မင်းပေးတဲ့ ဆုငွေနဲ့ နွားဝယ်မလား… လှည်ယဉ်ကျော့ ၀ယ်ဦးမလား လိုချင်တာအားလုံး ရမှာပဲ´
ကျုပ်တို့ အုပ်ဖိုရွာက ဆင်တဲဝချောင်းဘေးတင်၊ ရွာထဲက လူတော်တော်များများ နွေတွင်း၊ ဆောင်းတွင်းမှာ ဆင်တဲဝ ချောင်းသဲပြင်ကြီးကို လက်ကလေးနဲ့ ဘေးကော်ယက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ရေကြည်လာအောင် ခဏထား… အဲဒီရေကိုမှ သောက်ကြတာလေ။ မန်ကျည်းပင်ရိပ်ကြီးနဲ့ ရွာလယ်က ဘကြီးခက်တွင်းက ယောက်ျားကြီး တစ်လံမက ကျယ်တယ်… နွေလယ်ခေါင်ဖျားဆို စိမ့်အေးနေတာပဲပေါ့… ဒါပေမယ့် ဘယ်ရွာသားကမှ ဘကြီးခက်တွင်းက မငင်ဘူး။ မိရိုးဖလာ ဓလေ့ ချောင်းထဲပြေး ကိုယ်တိုင် ယက်ကော်ပြီးမှ ရတဲ့ရေပဲ သောက်ကြတာကိုး။
တွင်းကျယ်ကျယ် နက်နက်ဆိုလို့ ရွာလယ် ရေတွင်းလောက်ပဲ မြင်ဖူးတဲ့ ကျုပ်တို့ရွာသားတွေမှာ ရေနံတွင်းဆိုတာ ကိုရင်တိုက်စည်းပြောသလိုပဲ ဘကြီးခက် တွင်းလောက်လား ဒီထက်ကျယ်သလား ဘာမှကို မသိတာ မစဉ်းစားတတ်တာ။
`မီးကိုနိုင်တာ ရေပဲ။ ဒါ လူတကာ သိမှတော့ အင်္ဂလိပ်မင်းများလည်း သိမှာပဲ ဒါပေသိ ရေနံဆိုတာ ဒီလောက်ပူတာ ရေနံထွက်တဲ့ နေရာမှာဆိုတော့ ရေရှားရောပေါ့။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်မင်းများလည်း မနိုင်တော့တာနေမှာ ကျုပ်စဉ်းစားတာကတော့ ရေနံတွင်းကြီးလည်း ပိတ်မှ မီးကိုနိုင်မှာ…
ဒီတော့ တွင်းပိတ်သွားအောင် ရေချည်းပဲမသုံးဘဲ ရေနဲ့ရွှံ့ရောပြီး ရွှံ့လုံးတွေကို ကိုင်ပစ်ပေါက်လိုက်ရင် ပြီးကရောပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား ကိုရင်တို့ရာ´
`ကိုရင်ပြောတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ… လူက အတော်လိုမှာ´
`အိုး… ကိုရင့်နှယ် အင်္ဂလိပ်မင်းများဆီက တောင်းမှာပေါ့ နော ကိုရင်တိုက်စည်း´
`လူတွေ တစ်ပြိုင်တည်း ပစ်နိုင်ဖို့လည်း လိုမှာ´
`ရွှံ့က လေးတော့ ထန်းသီးလောက် ကိုင်မှ ဝေးဝေးပြေးမှာ´
`ကိုရင်ရာ ယောက်ျားတွေချည်းပဲဟာ သပိတ်လုံးလောက်တော့ ကိုင်မှာပေါ့´
`ဟ… သန်ချင်သလောက် သန်ပစေ၊ သပိတ်လုံး ရွှံ့အလကား ဝေးဝေးပစ်နိုင်ပါ့မလား… အုန်းသီးလောက်ဆို ဟုတ်သေး´
ကိုရင်တိုက်စည်း ဖောက်လိုက်တဲ့ လမ်းပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ ရွာသားတွေအသံက ကျွက်ကျွက်ကို ညံလို့ပေါ့။ နောက်တော့ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ပါ ပါလာပြီး မသွားခင် ကန်တော့ပွဲတင်ဖို့ နယ်ရှင် ပယ်ရှင်တွေကို အရိုအသေပေးဖို့ပါ သတိပေးသွားလေရဲ့။
တကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါ ယာသမား၊ ထန်းသမားတွေက လုပ်လက်စတွေနဲ့ လိုက်လို့မဖြစ်၊ မီးဆိုတာကလည်း အချိန်စောင့်လို့မရဆိုတော့ ကိုရင်တိုက်စည်းနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ (၅)ယောက်က ရေနံချောင်းသွား အစိုးရမင်းများကို တွေ့ပြီး မီးငြှိမ်းဖို့ လူတစ်ထောင်တောင်းမယ်… အဲဒီလူတွေကို ကိုရင်တိုက်စည်းတို့အဖွဲ့က သေချာသင်ပြပေးမယ်ပေါ့။ အုန်းသီးလုံးလောက် ရွှံ့လုံးတွေကိုင်ပြီး လူတစ်ထောင်အားနဲ့ ပစ်ပေါက်ငြှိမ်းလိုက်ရင် ဘယ်မီးက ခံနိုင်လိမ့်မတုန်းပေါ့လေ။
တစ်သုတ် လူတစ်ရာဆိုရင် နည်းမလား… လူနှစ်ရာဆိုရင် များမလား… တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ်၊ ပထမအသုတ်က ပစ်ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့လမ်းက အမြန်ပြေး… နောက်တစ်သုတ်က အပြေးတက်၊ အမြန်ပစ်၊ အပြေးဆင်း၊ အဲလို… အဲလိုနဲ့ စီစဉ်အကွက်ချလို့ တက်ကြွလို့ပေါ့။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် စည်းဝေးလိုက်ကြတာ အရင်က မတည့်တဲ့ လူအချင်းချင်းတောင် မတည့်တာမေ့ပြီး သဘောတွေညီလို့.. တစ်ရွာလုံး တက်ကြွညီညာလို့ပေါ့။
အဲဒီလိုနဲ့ မနက်လင်းရင် နယ်တော်ရှင်၊ ရွာတော်ရှင်တွေကို ဦးတိုက်ဖို့နဲ့ ကိုရင်တိုက်စည်းတို့ သွားဖို့ တာဝန်ကိုယ်စီခွဲပြီး လူစုကွဲသွားကြတယ်။
မိုးမလင်းခင်… ပြောရမယ်ဆိုရင် ညလုံးပေါက်လိုလိုပါပဲ၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းတဲ့သူက ပေါင်း၊ ကန်တော့ပွဲ ပြင်တဲ့သူက ပြင်၊ အကြော်ကြော်တဲ့သူက ကြော်လို့၊ လက်တွေ့မှာ မလိုက်နိုင်တောင် သဒ္ဒါတရားထက်သန်တဲ့ တောသူတောင်သားတို့ သဘာဝရယ်… အင်္ဂလိပ်မင်းများရဲ့ ဆုငွေတွေကို မျှော်ကိုးပြီးတော့ရယ် ဒါမှမဟုတ်ဘဲ အပြန်လက်ဆောင် ပါလေနိုးနဲ့ ပို့တဲ့လူတွေရဲ့ မုန့်တွေက ကိုရင်တိုက်စည်း တစ်အိမ်လုံး ကြိုင်လှောက်နေတော့တယ်။ ကာယကံရှင် မိသားစုတွေကလည်း ယူသွားမယ့် ပစ္စည်းတွေ ထည့်သိုရင်း မှာတမ်းခြွေလို့မပြီး။
ရောင်နီလာတာနဲ့ အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးသား၊ ကိုရင်တိုက်စည်းအိမ်မှာ ကလေးလူကြီး ဒင်းကြမ်းပြည့်လို့။ ပွဲပြင်ထားတာတွေ ကြည့်လိုက် အချင်းချင်း စကားပြောလိုက်၊ ကလေးတွေက ငိုလိုက်နဲ့ ကိုရင်တိုက်စည်းအိမ်မှာ မကြုံစဖူး အဖြစ်ထူးပေါ့။
အိမ်ထဲက ကိုရင်တိုက်စည်းတို့အဖွဲ့ ဆင်းလာတာလည်း မြင်ရော အားလုံးငြိမ်ကျသွားတာပဲ။ ကိုရင်တိုက်စည်းက ခေါင်းဆောင်ပီပီ ဟန်ပါပါ ဘုရားပွဲအရင်ကန်တော့လိုက်တယ်… နောက် ကန်တော့ပွဲတစ်ခုရှေ့မှာ ထိုင်ချ လက်အုပ်ချီပြီး ချောင်းဟန့်လိုက်သေးတာ… ပြီးမှ ကျကျနန ဦးသုံးကြိမ်ချပြီး
`အရှေ့ နေထွက်၊ အနောက်နေ၀င်၊ တောင်တံငါ့ကွန်၊ မြောက် ဓူဝံ… နယ်စွန်သတ်မှတ် လေးရပ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော နတ်မြတ်နတ်ကောင်း နတ်အပေါင်းတို့ ကျွန်တော်မျိုးတို့ မီးသတ်ပွဲကြီးကို ကူညီဝိုင်းလို့ မှိုင်းမတော်မူကြပါ´
အချိန်လုပြီး လုပ်နေရတဲ့သူပီပီ တိုတိုတုတ်တုတ် ဆုတောင်းအပြီး ဦးသုံးကြိမ်ချ နောက်ပရိသတ်ကို နှုတ်ဆက်တော့ ပရိသတ်ကြီးကလည်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက်မှာလို့ကို မဆုံးနိုင်ဘူး။
ကိုရင်တိုက်စည်းတို့ ၀ိုင်းပေါက်ကထွက်မှ ကပ္ပိယကြီးက အပြေးအလွှားလိုက်လာပြီး ရွာဦးကျောင်းမှာ ပူဇော်ဖို့ မန်းလေးဘုရားကြီးမှာ ဆင်းတုတစ်ဆူ ကြည့်ခဲ့ပါဦးတဲ့။ ကိုရင်တိုက်စည်းခမျာ အထူးတလည်ကို မျက်နှာပွင့်လို့။
ရွာသားတွေကလည်း လက်တပြပြနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တာပေါ့။
ရေနံတွင်း သတင်းကြားပြီးကတည်းက သတင်းဖလှယ်ကြ၊ သတင်းလက်ဆင့်ကမ်းကြ၊ ကိုရင်တိုက်စည်းတို့နဲ့အတူ `နတ်ကရာကြည့်မော´ လုပ်လိုက်ကြနဲ့ အုတ်ဖို ရွာကလေးဟာ ကိုရင်တိုက်စည်းတို့ သွားပြန်တော့လည်း တိုင်ပင်လို့မပြီး၊ ထင်ကြေးပေးလို့ မပြီး… နောက်ရက်ကျမှပဲ အကင်းသေတယ် ပြောရမယ်။
အခုမှ ပုံမှန်လုပ်လက်စတွေ နွားငေါက်သံ၊ ထန်းပင်ပေါ်က သီချင်းဟစ်သံ၊ ထန်းရည် မူးသံတွေ၊ ရက်ကန်းခတ်သံတွေနဲ့ ရပ်သံရွာသံ ပြန်ပေါက်လာတော့တယ်။
အဲလို ပုံမှန်လည်ပတ်နေတုန်းမှာပဲ ကိုရင်တိုက်စည်းတို့အဖွဲ့က ပုံမမှန်တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ ရွာထဲ ၀င်လာပါတော့တယ်။တစ်ယောက်က စလို့ ဗျိုးဟစ်လိုက်သံတွေအောက်မှာ ကိုရင်တိုက်စည်းခေါင်းက ခါတိုင်းထက် ပိုငုံ့ကိုင်းနေသလိုပဲ…။
ပြန်ပြောပြနေတဲ့ သွားတူလာဖက် ရဲဘော်တွေကြားထဲမှာ ကိုရင်တိုက်စည်း မှိုင်တွေချနေရင်းက..
`အုန်းသီးလုံးလောက် ရွှံ့တုံးနဲ့ပေါက်ပြီး မီးငြှိမ်းဖို့ နေနေသာသာ… ရေနံတွန်း မီးလောင်တယ်ဆိုတာ ဆရာတော်ပြောတဲ့ ငရဲခန်းဆိုတာမျိုးနေမှာ ငရဲသားတွေ ရှိ မရှိ သေချာကြည့်ဦးမလို့.. ဒါပေမယ့် ကြည့်ဖို့ ဝေးလို့ အနားတောင် မကပ်နိုင်ဘူး တိုင်ဝက်လောက်က ကြည့်ပြီး ပြန်ခဲ့ရတယ်…´
ကိုရင်တိုက်စည်းအပြော အဆုံးမှာ ငေးကြောင်နေကြတဲ့ ရွာသားတွေ အသက်မဲ့သွားလိုက်ကြတာ သက်ပြင်းရှိုက်သံတောင် မကြားရဘူး။ သူတို့ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကတော့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ ရီဝေညှိုးမှိန်လို့ပေါ့…။
ကလျာ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉
ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မတ္တကောဟု ဘုရားရှင်မှ မိန့်ကြားခဲ့ဖူးကြောင်း ကြားသိခဲ့ဖူးသည်။ နောက်တော့ လူတစ်ကိုယ် အကြောက် တစ်မျိုးဟု မှတ်သား ရပြန်သည်။ ဆိုပါတော့ ရူးခြင်းလား၊ ကြောက်ခြင်းလား မကွဲပြားနိုင်သော စိတ်ဓာတ် တစ်မျိုးဖြင့် လူ့လောကကြီးမှာ ကျွန်မ ရှင်သန်ရပ်တည် နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်မ ငယ်ငယ်က ဇာတိရပ် ရွာမှာတော့ ကျွန်မကို နောက်ရဲ ပြောင်ရဲသူမရှိ။ အဖေက ရပ်ရွာမှာ ခန့်ထည်အောင်နေတတ်သူ၊ အမေ က ကျောင်းဆရာမ၊ အဲဒီတော့ အဖေ၊ အမေ မျက်နှာနှင့် နောက် ဝံ့သူမရှိ။ ကျွန်မအလယ်တန်း လောက်ကတော့ အမေနှင့်လုပ် ဖော်ကိုင်ဖက် ဆရာမတစ်ယောက် ၏ သား၊ ကိုဇော်ဟု အချင်းချင်း ခေါ်ကြသူ တစ်တန်းတည်းသားနှင့် အစခံခဲ့ရဖူးသည်။ သူ့အဖေက ကျွန်မကို ချွေးမ၊ ချွေးမ ခေါ်တတ် တော့ သူငယ်ချင်းတွေက စကြပါ သည်။ ကိုဇော်က စာတော်လေ တော့ ဆရာမ စာမေးလို့ မှန်အောင် ဖြေနိုင်လေတိုင်း ”တော်လှချည် လား”တဲ့..ဆက်ရန်ရှိသည့်စကား က ”ဒေါ်လှရီ သား” ပေါ့။ ကျွန်မ၏ မိခင်က ‘ဒေါ်လှရီ’လေ။ ကျွန်မတို့ တစ်တန်းသားတွေနှင့် ကျွန်မတို့ကို သင်သည့် ဆရာမများအကြား ဟား ရသော ဟားကွက်အဖြစ် ကာလ အတန်ကြာ ရပ်တည်ခဲ့ဖူးသည်။ ဒါပါပဲ..ဒါအလွန်ဆုံးပါပဲ။
အဲဒီလိုနှင့် ကျွန်မအသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ခါနီး ၁၉၉၈၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ‘တော်လှန်သော ခရီး’ ဟု စိတ်တွင် မှတ်ယူလျက် မန္တလေး မြို့သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ အဲဒီက စလို့ ကိုယ့်အရိပ်ကိုယ်ခိုရင်း လျှောက်လှမ်းခဲ့သော ဘဝလမ်းမှာ ယခုချိန်ထိ ကြုံနေရတာက နိဒါန်း ချီခဲ့သော စိတ်ဓာတ်တစ်မျိုးနှင့် ပင်။
မန္တလေးမြို့၊ ၇၃ လမ်းပေါ်က ချိုးကွေ့ဝင်ရသော ဒူးကြားလမ်း ပေါ်ရှိ အဆောင်တစ်ခုမှာနေရင်း ကျွန်မအလုပ်ရှိရာရွာသို့ သွားရ သည်။ ရွာမှာမနေရဲသည့် ကျွန်မက မနက်အစောကြီးထသွားပြီး ည မန္တလေးအဆောင်မှာ ပြန်အိပ်သည်။ ကျောပိုးအိတ်ကလေးလွယ် ပြီး ရွာထဲဝင်၊ ထွက်နေသည့် ကျွန်မ ကို ရွာသားတွေက အထူးတဆန်း ပေါ့။ တောင်ကြီးက လာသည်ဆိုတော့ ”တောင်ကြီးမမ” တဲ့ ကျွန်မ ကိုမြင်တိုင်း ”တောင်ကြီးမောက်မယ် ရှား လား လား လာ လာ” ဟု အော်တတ်ကြသည်။
ရွာကလေးကို ဖြတ်သန်းရချိန် များလာတော့ ရွာကလေးနှင့် ခင်မင်မှု တိုးလာသလို ကျွန်မလုပ်ငန်းက တိုးတက်လာခဲ့ပြီ။ အုတ်လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက် အုတ်စိမ်းဘဝမှ မီး ရှို့သည့်အဆင့် ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဆို တော့ တိုးတက်သည်ဆိုကြပါစို့။ အုတ်နီခဲများကို ဆိုက်သို့ ပို့ရန်ပြင်ရ တော့သည်။ အဲဒီရက်တွေမှာ ကျွန်မ တစ်သက်လုံးစွဲနေစေမည့် အကြောက်တရားတို့ကို လက်ခံရရှိခဲ့တော့သည်။
အုတ်ဖိုက အုတ်နီခဲတွေပို့ဖို့ ကားလိုသည်။ မန္တလေးမှာ ကိုယ်ပိုင် ကားမရှိတော့ သူများကားငှားရ သည်ပေါ့။ တစ်ရက်တော့အမျိုးသမီး တစ်ယောက် လုံချည်လေးတိုတို ဝတ်ကာ ပျာယာပျာယာနှင့် ရောက် လာသည်။ နေ့လယ်နေ့ခင်း ကျွန်မ နားတတ်သော တဲကလေးထဲ ခါးထောက်မျက်လုံးဝေ့ကြည့်ပြီး ”ကိုကြည်ကော ကိုကြည်..” တဲ့။
အဲဒီအချိန်အထိ နာမည်တွေ မသိသေးသည့် ကျွန်မက
”ဘယ်သူ့မေးတာလဲ မသိ ဘူး”
”အုံနာလေ ဟိုကားရဲ့ အုံနာ ကို မေးတာ”
”မသိဘူးလေ ကားနားရှိမှာ ပေါ့ လိုက်သွားပါလား”
ဒရိုင်ဘာမှန်းမသိ၊ အုံနာမှန်း မသိ၊ အုံနာ ကတော်မှန်းမသိ၊ အားလုံးကို ဝါးတားတားနိုင်နေချိန်မှာ အဲဒီ အုံနာက တော်လိုက်လာတာ က ကျွန်မနဲ့ သူ့ယောက်ျားကို စိတ် မချလို့ ဆိုတဲ့အသံတွေ ထွက်လာတော့ ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံးတောင့် မတ်သွားသည်အထိ အံ့သြတုန်လှုပ် ရသည်။
ကျွဲနဖားရွာဆိုတာ ကျွဲနဖား တောင်နှင့် တော်လှန်ရေးကြောင့် နာမည်ကြီးသလို ညမီးထိန်ထိန် လင်းနေတတ်သည့် ကျွန်းသစ်ဆိပ် ကမ်းကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးခဲ့ဖူး သည်။ အဲဒါကြောင့် ရွာမှာ ထောင်ကျဖူးသူ အများကြီးရှိပြီး အဲသည် လူတွေက တိုက်ပိုင်၊ ကားပိုင်တွေ နှင့် တစ်ရွာလုံး တိုက်တွေ ဖွေးနေတော့သည်။ ကျွန်းသစ် ခေတ်ကောင်းစဉ် ရွာသားတွေရဲ့ အနေအထားကို တိုက်ပိုင်၊ ကားပိုင်သည့် ရွာသား ကြီးပြောပြတာက
”တောင်ကြီးမမနှယ် ကျုပ်တို့ ကလည်း ဘာမှမသိ မအူမလည် တွေ၊ စကွဲယားတွေ ဈေးကောင်းတယ်၊ ကျုပ်တို့ ရွာကိုလာတဲ့သူတိုင်း စကွဲယား၊ စကွဲယားနဲ့ ဘာပါလိမ့် မလဲအောက်မေ့တယ် လေးထောင့်တုံးကို ပြောတာဗျ” တဲ့။
အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ပြောနေသော လက်ညှိုးလောက် ဆွဲကြိုးတုတ်တုတ်ကြီး ဝတ်ထားသည့် ရွာသားကြီးအပြောကို ရယ်ချင်ပေမယ့် မရယ်ရက်၊ ပြုံးချင်ပေမယ့် မပြုံးရက်ခဲ့။ တကယ်ဆိုတော့ ကျွဲနဖားက မန္တလေးနှင့် ၁၆ မိုင် သာ ဝေးပါသည်။
ဘဝကို တန်ဖိုးထားစိတ်၊ ပညာကို ခင်တွယ်စိတ်၊ ဘယ်သူ့ကို မှ အောက်ကျမခံနိုင်စိတ်တွေနှင့် တစ်ပြည်တစ်ရွာမှ လာနေသည့် ‘ငါ’ လို လူမျိုးကိုမှ ပြောတတ်ပ လေဟူသော မာနက ဒေါသကြား တလူလူလွင့်လို့။ တကယ်လည်း ကျွန်မက ကိုယ့်ခွန်ကိုယ့်အားမဟုတ် ရင် တန်ဖိုးထားသူမဟုတ်၊ ဒါကြောင့် လည်း ဆွေမျိုးမရှိ၊ အသိမရှိသည့် ဒီလိုတောထဲမှာ ဇာတိရင်းမြစ်မသိရသည့် အလုပ်သမားလူကြမ်းများ ကို အုပ်ချုပ်ရင်း တစ်ယောက်တည်း ပျော်နိုင်ခဲ့သည်ပင်။ နိစ္စဓူဝ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ရသည့် ကျွန်မ၏ အုတ်ဖိုက ရွာနှင့် တစ်ဖာလုံ ကျော်ကျော်ဝေးပြီး ရွာသင်္ချိုင်းနှင့် ကပ်နေပါသည်။ ရွာသူ၊ ရွာသားများပင် ကိစ္စမရှိလျှင် မလာတတ်၊ မလာ ရဲကြသည့် နေရာတစ်ခု၊ ”အလုပ် လုပ်မှရမယ်” ဆိုသော အတွေးအခေါ်နှင့်၊ ”သူများပစ္စည်း အလကားမရလိုသည့်” ခံယူချက်တို့ ပညတ်ခဲ့လို့သာ အဲဒီတောထဲ မှာ နေဝံ့ခြင်း ၊ နေပျော်ခြင်းပင်။ (ကျွန်မ၏ ‘နေရာ’ ဝတ္ထုကို အဲဒီရက်ပိုင်းက၊ အဲဒီ အုတ် ဖိုမှာ ရေးဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ပညာကို တန်ဖိုးထားသော ကျွန်မအတွက် သတင်းစာယူမည့် သူ မရှိသော၊ ကိုးရီးယားကားလာ ပြီးလို့ သတင်းလာလျှင် `TV´ ပိတ်ပစ်တတ်သော၊ တစ်ရွာလုံးမှာ စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ မရှိသော၊ တစ်ရွာလုံးပေါင်းမှ ဘွဲ့ရ နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်ထက် ပိုမရှိနိုင်သော၊ တိုက်ဆောက်ကားစီးပြီး ထောင်ထဲ ဝင်ချည်ထွက်လှည့် လုပ်နေသူ တွေ များသော ကျွဲနဖားရွာကို ဘဝခရီး တစ်ထောက်နားသည့် ယာယီစခန်း အဖြစ်သာ မှတ်ယူလေသူမို့ ဒီလို အပြောခံရခြင်းကို ခွေးရူးကိုက်ခံရခြင်းထက် နာကျင် စက်ဆုပ်မိသည်။
အဲဒီအချိန်မှစပြီး စိတ်ခံစားမှု တစ်မျိုးက ကျွန်မနှလုံးအိမ်ကို တဖြည်းဖြည်း တွယ်ငြိလာပါတော့သည်။ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားတွေနဲ့ အလုပ်သဘောအရ ဆက်ဆံ ရတိုင်း မာန်ချီထားတတ်သည့် ဓလေ့ ကျွန်မမှာ အရိုးစွဲနေခြင်းက ရူးခြင်းတစ်မျိုး ဟုဆိုလျှင် အစွပ်စွဲခံရမည်ကို ရှက်သော သိမ်ငယ်စိတ် က ကြောက်ခြင်းတစ်မျိုးဟု ပြောနိုင်ပါသည်။
အလုပ်လုပ်နေသူမို့လားတော့ မပြောတတ်။ ခဏခဏ ကြုံတွေ့ရတတ်သော အဲဒီအဖြစ်အပျက်များ ကို အံကြိတ်သည်းခံလာခဲ့ရာက ကျွန်မ လက်ထပ်ချိန်မှာ လွတ် မြောက်ပြီဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထင်စားခဲ့မိသည်။ သို့သော်..။
ကျွန်မ ဦးစီးခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့ဖူးသော အုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ယခု အမျိုးသား၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ လုပ်နေသော ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတို့က သဘာဝတူပါ သည်။ လူကြမ်းတွေကို ထိန်းချုပ်ရသော လုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ဦးဆောင်သူ အများစုက အမျိုးသားများ ဖြစ်နေကြခြင်းပါပဲ။ အမျိုးသမီး က ခပ်ရှားရှားပင်။
လုပ်ငန်းသဘာဝကို လိုက်ပြီး ကျွန်မအမျိုးသားနှင့် ကျွန်မ တာဝန်ကိုယ်စီ ခွဲယူထားရာ ကျွန်မတာဝန် ကျသော အပိုင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဆက်ဆံရာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း ကြုံရ၊ ဆုံရပြန်ပါသည်။ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရ လွယ်ကူသော မြို့ဧရိယာအတွင်းမှာ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မိလျှင် ခဏခဏကြုံတွေ့ရ တတ်တာကတစ်ဖက်သူ မိန်းမသားများ၏ တုံ့ပြန်မှုပင်။ ကျွန်မ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို မတော်တရော် တုံ့ပြန်ခံရလျှင် ကျွန်မခေါင်းထဲ မေးခွန်းတွေ တန်းစီ ဝင်လာပါတော့သည်။
ဖုန်းပြောသူတိုင်း သိနေမည့် ဖုန်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို နားမလည်ကြသူတွေလား၊ ဖုန်းမပြောဖူးသူတွေလား၊ တစ်ဖက်သူကို မမြင်ရဘဲ ဖုန်းသံကြားတာနဲ့ အကဲဆတ်နေရ လောက်အောင် သူတို့ ယောက်ျားတွေက လစ်ရင်လစ်သလို ဖောက်ပြန် တတ်ကြသူတွေလား၊ သူတို့ အိမ်ထောင်ရေးတွေက ဘယ်လို အိမ်ထောင်ရေး မျိုးပါလိမ့်၊ အလုပ်လုပ်နေသည့် ယောက်ျား တစ်ယောက်အပေါ် နားလည်မှုမပေးနိုင်တာ ဘယ်သူ့ချို့ယွင်းချက်လဲ ယောက်ျားအပြစ်လား၊ မိန်းမ အပြစ်လား..။
အဲဒီမေးခွန်းတွေနှင့်အတူ ကျွန်မ၏ ကြောက်သော စိတ်ကလေး ခေါင်းထောင်ထလာကာ ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းနိုင်တော့မည့် မီးတစ်စနှယ် တရှိန်ရှိန် တညီးညီး တောက်လောင် လာပြန်တော့သည်။ ”ငြှိမ်းလို့မရတဲ့..မီးတွေ”ပေါ့လေ။
အဲသလိုနှင့် ဖုန်းပဲဆက်ဆက်၊ လူကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့တွေ့ ကျွန်မ ကိုယ်ကျွန်မ မိတ်ဆက်မိသည်က ကျွန်မနာမည်မဟုတ်တော့။
”ကျွန်မ ဦးသိန်းနိုင် အမျိုးသမီးပါ” ဟု။ နောက် တစ်ယောက်တည်း သွားစရာကိစ္စကြုံလေတိုင်း လမ်းတွေ့သူမှန်သမျှကို ကျွန်မ အမျိုးသားက ဘယ်လို၊ ကျွန်မ သားတွေက ဘယ်လိုပေါ့။ မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ပြမိသည်ချည်းပင်။ ကျွန်မ စိတ္တဇကို မသိသူများက မိသားစုကို အလွန် အင်မတန်ခင်တွယ်သူဟု အထင်ရောက်ကြမှာပင်၊ အကြောင်းသင့်ချင်ပြန်တော့လည်း ဒီလိုပါပဲ။
မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် မိသားစုဆိုတာ အစဉ်အမြဲ မဟာရံတံတိုင်းကြီးဖြစ်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် လာတတ်သည့် စကားလုံး ဒုံးကျည်များ အကြား ကျွန်မ အသက်ရှူ ရပ်မိတတ်သည်။
”စစ်ပွဲတွေထဲမှာ စကားလုံး စစ်ပွဲက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး” ဆိုသော အဆိုအမိန့်တစ်ခု ရှိသည် မဟုတ်ပါလား။ ထိုကိစ္စ တွေနှင့်ကြုံရလေတိုင်း ကျွန်မ၏ ဟိုးအနက်ရှိုင်းဆုံး နှလုံးသားတစ်နေရာမှ ကဗျာလေး တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်း ထွက်ထွက်ကျလာတတ်ပါ သည်။ စိတ်လိုလက်ရ ရှိမိချိန် ကဗျာလေးကို စာစီမိတော့..
ကဲ့ရဲ့တင်းဆိုခြင်းက ရှောင်ကွင်းလို သတဲ့လား..
စတေးခံ ဗေဒါရီ ရေ
တကယ်အဟုတ်ပဲ ပျော်မွေ့နိုင်သ တဲ့လား…
ရေထဲမှာ အနှစ်ခံရဆဲပါပဲ။ ။
တံခွန်မရှိသော ရထား၊ လင် မရှိသော မိန်းမ.. မတင့်တယ်ဟု ရှေးစာများထဲမှာ ဖတ်မှတ် ရဖူးသည်။ ကဲ လင်ယောက်ျားနှင့် တွဲလက် မပျက်ရှိနေပါလျက် မလွတ် ကင်းနိုင်သူ ကျွန်မက လောကခုံရုံး ကို စွဲချက်တစ်ခုတင်ချင်ပါသည်။ တရားခံက အရေခွံပါးလျားသည့် ကျွန်မကိုယ်တိုင်လား၊ မိန်းမမြင်သမျှ၊ မိန်းမသံကြားသမျှ သဝန်တို စွပ်စွဲတတ်သူ တစ်ဖက်မိန်းမ တချို့လေလား၊ ဖောက်ပြန်တတ်သော၊ ဖောက်ပြန်လေ့ရှိသော၊ ဖောက်ပြန်တော့မှာပဲဟု သင်္ကာမကင်းခံရအောင် အနေအထိုင် လော်လည်သော သူတို့၏ ယောက်ျားများပေလား..။ ။
ရတီမဂ္ဂဇင်း ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလ
...... မြမန်းဂီရိ သေလာတောင်........ နန်းတည်ထောင် ကုန်းဘောင် နေသို့လင်း... စလာပြီ။ တမင်တကာ အသံသြသြကြီးနဲ့ လုပ်ဆိုနေတဲ့ မမ၀င်းရဲ့ အသံကို ကြားရပြီးရင် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ မွန်တို့ တစ်ဆောင်လုံး သိပြီးသား။
ဟိုဘက်ခြံက သေနာကောင်၊ ချောင်းတဲ့ကောင်၊ နှာခေါင်းရောင်နေသို့လင်း၊ ဟော... ချောင်းတယ်ခင်ဗျ။ ချောင်းတယ်။
မမ၀င်းဆိုတာ မွန်တို့အဆောင်မှာ မမ။ အပျိုကြီးပီပီ အင်မတန် ရွတ်တာ။ သူ စိတ်လိုလက်ရရှိချိန်တွေမှာ အခုလို တော်ရုံနဲ့ ပြီးတတ်ပေမယ့် သူများစိတ်တိုနေချိန် ဆိုရင် ဟိုဘက်အဆောင်က ချောင်းတဲ့သူ မစားသာဘူးမှတ်။
ရှရှက်တတ်ရင် ချက်ချင်း လဲသေသွားနိုင်လောက်တဲ့ စကားလုံးလှလှတွေ သုံးပြီး တစ်ဖက်လူ နာလန်မထူနိုင်အောင် တိုက်ခိုက်နေကျ။
သူတို့တွေကလည်း သူတို့တွေပဲ။ အေးလေး.... အဆောင်ဆိုမှတော့ မ တစ်ရာသား လူမျိုးစုံ စရိုက်မျိုးစုံ ကွန်းခိုတတ်ကြတာ ကိုးနော်။
မွန်တို့အဆောင်က `မြတမာ´ ဆောင်။ မွန်တို့နဲ့ ကပ်လျက်က `အရိပ်ကလေး´ အမျိုးသားဆောင်။ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ အဆောင်ပိုင်ရှင်က ချစ်သူရဲ့နောက်က သစ္စာရှိကြမယ့် အဆောင်သားတွေတဲ့။ အရိပ်ကလေးလိုပေါ့တဲ့။ မြို့ထဲ အိမ်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အဆောင်ချင်းက ဘာမှမဝေးဘူး။ ခြံစည်းရိုးကလည်း ၀ါးတွေကို စိတ်ပြီး ကပ်ရက်ထားတဲ့ ၀ါးကပ်စည်းရိုး။ ဘယ်နှခုနှစ်က ကာထားမှန်းမသိတော့။ အပေါက်အပြဲတွေနဲ့ ဆွေးလို့။ နှစ်ဆောင်လုံးက မျက်နှာစာဘက်ကို ကပ်ပြီး ဆောက်ထားတာဆိုတော့ အဆောင်နှစ်ခုအကြား ခြံစည်းရိုးနဲ့ အဆောင်တွေနဲ့က ၁၅ပေလောက်စီ ကွာတယ်။ အဆောင်နဲ့ ခြံစည်းရိုးကြားမှာ ရေချိုးရတဲ့ကန်။ မွန်တို့အဆောင်က မိန်းကလေးဆောင်သာ ဆိုတယ် ရေချိုးခန်းမရှိဘူး။ ကာမထားဘူး။ အဲဒီတော့ မွန်တို့ ရေချိုးပြီဆိုရင် ဟိုဘက်ဆောင်က ကောင်လေးတွေက ချောင်းကြရော။
တချို့က လူကြီး လူကောင်းဆန်ဆန် သမာဓိချောင်းပေါ့။ အိမ်သာသွား သလိုလို၊ အဆောင်ထဲ ၀င်သလိုလို၊ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ချောင်းတယ်။ အဲ... တချို့ကတော့ လူရွှင်တော်ချောင်းနည်း။ မွန်တို့ ရေချိုးရင် သူတို့ပါ လိုက်ချိုးပြီး ဆပ်ပြာတိုက်သလိုလို၊ သွားတိုက်သလိုလိုနဲ့။ ရေချိုးတဲ့နေရာက မျက်နှာပြောင်နဲ့ လှမ်းချောင်းတယ်။ ရေကန်နှစ်ခုကလည်း မျက်စောင်းထိုးကလေး။ ၀ါးထရံပဲ ခြားတာကိုးနော်။
မွန်ရောက်စတုန်းကဆို ညမှောင်မှ ရေချိုးရဲတယ်။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးလို နေရာမျိုးမှာ ရေမချိုးရဘဲ ဘယ်သူက ကြာရှည်နေနိုင်မတဲ့လဲ။ နောက်တော့ မျက်စိရှင်ရှင်ထားပြီး ချိုးရတော့တာ။ အခုတော့လည်း ရိုးသွားသလိုပါပဲ။
မွန် မှတ်မိသေးတယ်။ လားရှိုးက LCCI လာတက်တဲ့ ကောင်မလေး။ သူက ရေချိုးမလို့ပြင်တုန်း ရှိသေးတယ်။ ၀ါးကပ်စည်းရိုးကြားက မျက်လုံးကြီးပေါ်လာလို့ အော်လိုက်တာ တစ်ဆောင်လုံးကို ဆူညံသွားတာပဲ။ `မျက်လုံးကြီး .... မျက်လုံးကြီး´ ဆိုပြီး ငိုတာ တော်တော်နဲ့ မတိတ်ဘူး။ အဆောင်ရှင်အန်တီ ကိုယ်တိုင် လာချော့ပြီး ဟိုဘက်အဆောင်မှူးကို ပြောပေးမှ တိတ်တော့တယ်။
မြတမာကို ရောက်တဲ့သူတိုင်း ရင်ဆိုင်နေကျဆိုတော့ ကြာတော့လည်း ရိုးသွားတတ်ကြတာပါပဲ။ အခုလို ကျောင်းပိတ်ထားချိန်မှာတော့ တစ်ဆောင်လုံးမှ မွန်တို့ ငါးယောက်ပဲရှိတာ။ မမ၀င်းရယ်၊ မသိင်္ဂီရယ်၊ မလေးရယ်၊ မွန်နဲ့ လားရှိုးက ကောင်မလေး မူယာ။ မသိဂီင်္နဲ့ မလေးက မန္တလေးတက္ကသိုလ်က ကျူတာ မမတွေ။ မွန်က MFL မှာ တရုတ်ပထမနှစ် တက်နေတာ။
ညနေ မနက် ရေချိုးချိန်တွေဆိုရင် မွန်တို့တစ်ဆောင်လုံး စုပြီးမှ ရေချိုးတယ်။ အုပ်စုတောင့်တော့ ချောင်းလည်း ခဏပဲ။ မမ၀င်းရဲ့ လေသံကိုတော့ သူတို့ တစ်ဆောင်လုံးကြောက်ကြတယ်။ တစ်ဆောင်လုံးသာ ပြောရတယ်။ မချောင်းတဲ့သူလည်း ရှိတာပေါ့။ သူတို့ အဆောင်က လူစုံတယ်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ကျောင်းဆရာ GTI ကျောင်းသား ညနေပိုင်း ကျောင်းသားတွေ နေလတို့ KMD တို့ တက်နေတဲ့သူ၊ နောက် Language တစ်ခုခု တက်နေတဲ့သူ အစုံပါပဲ။
အဲသလို မစာမနာ ချောင်းတတ်ကြတာ တစ်ခုကလွဲရင် အရိပ်ကလေးဟာ မွန်တို့ရဲ့ မောင်နှမဆောင်ပါပဲ။
အဆောင်နေတဲ့လူတိုင်းဟာ ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ မိဝေးဖဝေး လာနကြရတာ ကိုးနော်။ နေ့ခင်းဘက်တွေ မှာ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်။ ညဘက်တွေ ရောက်တော့မှ အဆောင်မှာစု၊ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်၊ သိပ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ညကလေးတွေပေါ့။
မွန်တို့အဆောင်နဲ့ ရေကန်ကြားမှာ အုန်းပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။ လသာတဲ့ ညတွေဆိုရင် အုန်းလက်တွေပေါ်မှာ လရောင်က ဖြာကျလို့။ လေတိုက်တိုင်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ အုန်းလက်တွေဟာ လရောင်ရဲ့ ရောင်ပြန်နဲ့ တလက်လက်ရွေ့နေတာ မွန်အနှစ်သက်ဆုံးပဲ။ ရေချိုးကန်ဘက် ထွက်တဲ့ အဆောင်လမ်းကြားမှာ ဖျာကလေးချပြီး နေကြာစေ့ဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်သုပ်ဖြစ်ဖြစ် စားကြရင်း ပေါက်ကရပြောကြ၊ တစ်နေ့တာ ခံစားရသမျှ ဒုက္ခတွေကို ရယ်သံတွေနဲ့ သုခအဖြစ် ပြောင်းကြ၊ မန္တလေးညတွေဟာ မွန်အတွက်တော့ တကယ်မမေ့နိုင်စရာပေါ့။
ပြောစရာတွေကုန်လို့ ငြိမ်သွားပြီဆိုရင် မွန်ကစပြီး သီချင်းဆို မသိင်္ဂီကော မူယာကော မလေးကော။ ဂီတဟာ စိတ်နှလုံးကို ညွတ်နူးစေတတ်တာပဲ။ မွန့်သီချင်းသံနောက်မှာ သူတို့တစ်တွေ တန်းစီပါလာပြီး တစ်အုပ်စုလုံး သံပြိုင်ဆိုကြ။ ဆိုရင်း ဆိုရင်း တစ်ယောက်ယောက်ကများ မှားပြီဆိုရင် နောက်တစ်ယောက် က လိုက်မှား ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ဇဝေဇ၀ါ။ ကိုယ်ဆိုတာပဲ မှားသလား အတွေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ၀ါးခနဲ ရယ်မောမိကြ။
ခဏကြာရင် လျှောက်လည်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ဒါမှမဟုတ် တီဗွီကြည့်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ဟိုဘက်အဆောင်က အဖွဲ့တွေ ရောက်လာပြီ။ ပြီးရင် ရေကန်ပေါင်ပေါ်ထိုင်ပြီး ဂစ်တာတီးတော့တာပဲ။ နောက် သီချင်းတွေ ဖျက်ဆို ရယ်နေရတယ်။ သူတို့တစ်အုပ်စုလုံး အဘွားကြီးသံနဲ့။
`၈၆နှစ် ၈၆နှစ်... ကိုကို ကျွန်မကို အဘွားလို့ မခေါ်နဲ့´
အဲဒီသီချင်းများဆိုရင် မွန်တို့ပါးစပ်ကို ပိတ်မနေရဘူး။ ရယ်ရလို့။ ပါးစပ်ညောင်းပြီဆိုရင် မောင့်လပြည့်ဝန်းလို ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာလို အမေ့အိမ်လိုမျိုး နားထောင်ချင်ပြီဆိုရင် အစပိုင်း တစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းလောက် ဆိုပြလိုက်။ ဒါဆိုရင် သူတို့က သိပြီ။ ဒါ မွန်တို့ request လုပ်တာပဲဆိုပြီး ဖျက်မဆိုတော့ဘဲ ကောင်းကောင်းလေးတီးပြတတ်တယ်။
သူတို့ကလည်း လူလည်ကျတတ်သေး။ မွန်တို့တောင်းသမျှ ဆိုပြပြီးရင် ပန်းချစ်သူတို့ စတော်ဘယ်ရီ ချစ်သည်းရှင်တို့ စုံတွဲသီချင်းတွေကို တီးပြီး မွန့်ကို ဆိုခိုင်းတတ်ရဲ့။ မွန်တို့ကများ မသိဟန်ဆောင်နေရင်
`အရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ မမကြီး စုံတွဲဆိုရအောင်´လို့ ပြန်အော်တတ်ပြန်ရော။ ဒါဆို မနေသာတော့ဘူး။ မွန်ဆိုတာကလည်း သီချင်းသာဆိုနေရရင် ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့။
`သီချင်းတွေနဲ့ ဘ၀တည်ဆောက်နေတာ´လို့ ပြောင်ချော်ချော ကြွေးကြော်တတ်သူဆိုတော့ နှစ်ခါမပြောရဘူး။
ခြံစည်းရိုးကလေး ခြားပြီး ပန်းချစ်သူကို ဆိုမိတိုင်း မွန့်ရင်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ လှစ်ဟာသွားသလို။ အဲသလိုနဲ့ပဲ သူ့ကို သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့ရတော့တာ။ ဘယ်အချိန်ကများ သန္ဓေတည်ခဲ့ပါလိမ့်လို့ တွေးမိတဲ့အခါမှာ သူ့အပေါ် သံယောဇဉ်က အရမ်းကို ခိုင်မြဲနေခဲ့ပြီပဲ။
သူ့အသံ၊ သူ့သီချင်းနဲ့ သူ့ဂီတမှာ မွေ့လျော်တွယ်တာ ခဲ့မိတဲ့ မွန်က သူ့ကို အခုထက်ထိ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး။
သီချင်းသံသက်သက်သာ မှတ်မိတဲ့ သူ့အသံကို ကြားရဖို့ ညတွေညတွေကို ရင်ခုန်လှုပ်ရှားစွာ မျှော်တတ်ခဲ့ပြီ။
မွန်က သီချင်းနှစ်သက်သူပီပီ သီချင်းတော်တော်များများရပေမယ့် သူက ဇော်ဝင်းထွဋ် အဲလက်စ် ရင်ဂိုနဲ့ သူကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေလောက်ပဲ ရတဲ့သူ။
မွန်တို့အဖွဲ့က သီချင်းတောင်းလို့ ဆိုပြရရင် ဖယောင်းတိုင် မီးရောင်ကလေးနဲ့ Notes တွေကြည့်ပြီး တီး၊ လက်ကတီးနိုင်ပြီး ပါးစပ်က မဆိုနိုင်တော့ ထစ်အ ထစ်အနဲ့ အဲဒီအချိန်တွေဆို သူ့သူငယ်ချင်းတွေက...
`လုပ်ကြပါဦးဟ၊ ငါတို့လည်း ထောက်ကြပါဦးဟ´
ညာတာပါတေးနဲ့ မွန့်ကို သီချင်းဆိုခိုင်းတတ်ပြီ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း သူ့အသံ သြသြချိုချိုကလေးနဲ့ စတော်ဘယ်ရီချစ်သည်းရှင်ကို တီးတတ်ရဲ့။ မွန်ဆိုတဲ့ မွန်ကလည်း သီချင်းတွေကိုသာမက ဂစ်တာပိုင်ရှင်ကိုပါ အိပ်မက်မက်တတ်နေပြီဆိုတော့ ဟန်ဆောင်ပြီးတောင် မငြင်းဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်ဆိုရမယ့် အလှည့်မှာ ညင်သာစိတ်ကူး အိပ်မက်တွေနဲ့ မျက်လုံးကလေးမှိတ်ပြီး အလိုက်သင့်ဆိုတတ်စမြဲ။
မွန်တို့ မျက်နှာသစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပန်းကန်ဆေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေကန်ကလေးနား လာပြီဆိုကတည်းက သူတို့အဆောင်ဘက်ကို အကြည့်တွေ ပို့လွှတ်ပြီးသား။ အရင်တုန်းက ကာကွယ်ဖို့။ အခုတော့ ရှာဖွေဖို့ပေါ့။
ညတွေ ညတွေမှာ မွန့်ကို အိပ်မက်လှလှ မက်စေတတ်တဲ့ စိတ်ကူးထဲက မွန့်မင်းသားဟာ ဘယ်သူများလဲ။ သာမန်စကားပြောသံတွေကို မဝေခွဲတတ်တဲ့ မွန်နဲ့ ညရောက်မှ အဆောင်မြဲတဲ့ ဂစ်တာတီးတဲ့သူ နှစ်ယောက်ရဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်က အလှမ်းဝေးလွန်းလှပါရဲ့။
မှတ်မှတ်ရရ လပြည့်ညတွေကို နှစ်ခါဖြတ်ကျော်ပြီး တစ်ခုသော စနေမှာ မွန်နဲ့ မလေးက အ၀တ်လျှော်ရင်း သီချင်းဆိုလိုက်ကြ စကားပြောလိုက်ကြ သူတို့ အဆောင်မှာလည်း ညတိုင်းဖြစ်တဲ့ ဖဲဝိုင်းအကြောင်း ငြင်းရင်း ခုန်ရင်း ရေချိုးနေကြ ညနေကလေးက ပျော်ရွှင်စွာ အသက်ဝင်နေတယ်။ ခဏနေတော့ ဂစ်တာသံသဲ့သဲ့နဲ့အတူ သီချင်းဆိုသံ။ မွန့်ရင်တွေ ပရမ်းပတာခုန်ပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ။
`မလေး... မလေး သူ့ကို တွေ့ဖူးချင်တယ်´
ဗလုံးဗထွေး ပြောလိုက်မိတဲ့ စကားသံတွေနဲ့အတူ ဟန်မဆောင်ချင်တဲ့ မွန့်ရင်ထဲက တစ်စုံတစ်ရာကို ရိပ်မိစွာ မလေးက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရယ်မောရင်း....
`လာခဲ့ ဒီနေရာက မြင်ရတယ်´
မွန့်မှာ မြင်ကလည်းမြင်ချင် ကြည့်လိုက်ဖို့လည်း မရဲ ဗျာများနေပြီး ကြောင်တက်တက်ရပ်နေတုန်း။
`ဟဲ့... မွန်ရဲ့ ကြည့်ချင်တယ်ဆို လာကြည့်လေ´
မွန်တို့ ကြည့်နေတာ တစ်ယောက်ယောက် မြင်သွားမျာ စိုးရိမ်စိတ်ကို သူ့ကို မြင်ဖူးချင်စိတ်က အနိုင်ယူတယ်။ ကဲ.... အဲသလို ကြည့်တော့ ဘာဖြစ်သေးတုန်း၊ ကိုယ့်ဘာသာ အားတင်းရင်း ၀ါးကပ်အပေါက်ကြားက ချောင်းကြည့်မိတော့ တွေ့ပါပြီ။ ပါတိတ်ရှပ်လက်တိုကလေးနဲ့ ကချင်ပုဆိုကလေးနဲ့။
`သူ့ကို မွန်သိတယ်။ OASIS မှာထိုင်ရင် မွန့်ကို ပြောင်ပြနေကျ။ အမေလေး ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ စိတ်ညစ်ပါတယ်။ တကယ်ပါပဲ။ ရုပ်ကဆိုးရတဲ့အထဲ နည်းနည်းလေးမှ ဣနြေ္ဒမရဘူး´
မွန်က အလိုမကျစွာ ရေရွတ်မိတော့ မလေးက တဟားဟား အော်ရယ်ပါလေရော။ သူကတော့ မွန့်ရဲ့ အဖြစ်ကို မသိတဲ့သူပီပီ စိတ်အေးလက်အေး သီချင်းဆိုမပျက်ဘူး။
သူက အသားညိုတယ်။ ပါးစပ်ပြဲတယ်။ ရုပ်က ဘာလိုနေမှန်း မသိရဘူး။ အရုပ်ဆိုးမှန်းသိသာစေပေမယ့် ဘယ်နေရာက ရုပ်ဆိုးတာလို့ ထောက်မပြနိုင်ဘူး။ ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုကောင်းတာက လွဲပြီး ဘာတခုမှ ထူးခြားထင်ရှားမှုမရှိတဲ့ အဲဒီအရုပ်ဆိုးဆိုး ကောင်လေးကိုပဲ အစွဲလမ်းကြီး စွဲလမ်းမိပါရော။
ပေါ့ဆိမ့်တစ်ခွက်နဲ့ OASIS ရဲ့ ညနေတွေဟာ သူ့ကြောင့် ပိုချိုမြိန်လာတယ်။
သူကတော့ မွန့်ကို အစောကြီးကတည်းက သိထားပြီးပုံပါပဲ။ GTI နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားတဲ့။ မိတ္ထီလာကတဲ့။ အခု Mid Term ပြီးလို့ ညနေ မိတ္ထီလာပြန်ရမှာတဲ့။ တမာပန်းရနံ့တွေ မွှေးတဲ့မနက်တစ်ခုမှာ သူကိုယ်တိုင် ပြောပြတဲ့ သူ့အကြောင်းကို နားထောင်ရင်း စားပွဲချင်းကပ်ရက် ပထမဦးဆုံး စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။
`မကျွမ်းခင်က လွမ်းနှင့်သည်´ဆိုတဲ့ စကားလေးကို အခေါက်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ရေတွက်ရင်း သူပြန်လာမယ့် ရက်ကိုပဲ မျှော်ရတော့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၂၀ကျော် ဝေးနေခဲ့ရတဲ့ လသာရက်တစ်ရက်မှာ သူ့သီချင်းသံကို ကြားရတယ်။
`မွန် သူ့ကို တကယ်ပဲ လွမ်းနေခဲ့တာပါကွယ်´
နောက်နေ့ ညနေ OASIS မှာ ဆုံတော့ မိတ္ထီလာလက်ဆောင် မုန့်တွေနဲ့ မွန့်စားပွဲမှာ လာထိုင်။ မွန်က အတိုးချ အလွမ်းတွေနဲ့ သူ့ကို ငေးမော။ သူက ရောက်တတ်ရာရာ စကားတွေ ပြောရင်း ဒုတိယအကြိမ် ဆုံမိကြပြန်တယ်။
`ဟေ့ကောင် ... ဟေ့ကောင် ဆရာမအတွက်ဆို´
`မင်းက ဒီလိုလား။ အဆောင်ရောက်မှ သိမယ်´
`မိုက်တယ်ကွာ။ ဖိုးသားတို့ စွံပုံများကတော့´
မွန်တို့တွေ အခုမှ သိကြတာပါကွယ်။ ဒီလောက်တောင် အော်ဟစ်သောင်းကျန်းဖို့ မသင့်ပါဘူး။ မွန်က အလိုမကျစွာ မျက်မှောင်ကုတ်မိတော့...
`ဒီကောင်တွေ ယူစားမှာစိုးလို့ ဆရာမအတွက်လို့ ညာပြောထားတာ သွားတော့မယ်နော်။ ဆက်ထိုင်နေရင် အော်လို့ ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး´
တောင်းပန်ကြည့်ကလေးနှင့် သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ၀ိုင်းမှာ သွားပြန်ထိုင်တဲ့အထိ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အော်တုန်း။ မွန့်ဘက်ကို တစ်ပြုံကြီး လှည့်ကြည့်ပြီး ထင်ရာမြင်ရာပြောနေတုန်း။ မွန်က ယောက်ျားလေးတွေကို အကြောင်းမဲ့ကြောက်လန့်တတ်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ၇ယောက် ၈ယောက် ၀ိုင်းထိုင်ပြီး လှောင်ပြောင်တဲ့ဘက် သန်းနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ နောက်ပြောင်မှုကိုတော့ တကယ်ပဲ စိတ်ကုန်မိတော့တယ်။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ ခေတ်လူငယ်တွေ မဟုတ်ကြဘူးလေလား။
အဲဒါနဲ့ပဲ မွန် OASIS ကို မသွားဖြစ်တော့။ တစ်ပတ်ကျော်တဲ့အထိ သူ့ကို မတွေ့ရတော့။ ညတွေကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ သူသီချင်းဆိုရင် သီချင်းသံမှာ မွန်တို့ တစ်ဆောင်လုံး ငြိမ်သက်နစ်မျောမြဲ။
တစ်ရက်... အဲဒီရက်ဟာ မွန်နဲ့သူ့ကို ရင်းနှီးခွင့် တွယ်တာခွင့်ရအောင် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ ရက်ပါပဲ။
မန္တလေးမြို့ကိုရောက်တာ လေးလကျော်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ မွန်က အခုထက်ထိ စက်ဘီးစီး မကျင်လည်သေး။ အဲဒီ ညနေက ကျောင်းကအပြန် မွန်တို့အဆောင်လမ်းကြားက ကားတစ်စီးကို ၀င်တိုက်မိတယ်။ ကားက လမ်းဘေးမှာ ရပ်ထားတာပါပဲ။ ဘယ်လိုက ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိ။ သိတဲ့အချိန်မှာ မွန့်စက်ဘီးက ကားကို တိုက်ပြီးနေပြီ။
ကားပိုင်ရှင်မိသားစုရဲ့ အော်သံရယ် လန့်သွားတဲ့ အရှိန်ရယ် အဆောင်ထဲကို ဘယ်လိုဝင်လာလို့ ၀င်လာမှန်းကို မသိလိုက်ဘူး။ ကြောက်လည်း ကြောက် ရှက်လည်း ရှက်။ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းကို မသိဘူး။ အဆောင်ထဲမှာလည်း တစ်ယောက်မှမရှိ။ မွန်က အဲသလောက် ပျော့ညံ့တတ်တာမှ မဟုတ်တာကွယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကို အလိုမကျမှန်းမသိ၊ အလိုမကျတဲ့အရှိန်တွေနဲ့ ငိုမိတော့တယ်။ ဟင့်အင်း မွန့်ဘေးမှာ အားပေးမယ့်သူ ဘယ်သူမှ မရှိခဲ့ဘူး။
မွန်ငိုနေတဲ့ အချိန် သူကလည်း မွန့်ကို အရှာ ၀ါးကပ်ပေါက်ကလေးကနေ....
`ငိုနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ။ သွားတောင်းပန်လိုက်လေ။ အဆောင်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးလား။ လာခေါ်မယ်။ လိုက်တောင်းပန်ပေးမယ်´
သူက အဆောင်ရှေ့က လာခေါ်ပြီး ကားပိုင်ရှင်တွေ ကျေနပ်တဲ့အထိ တောင်းပန်ပြီးတော့ မွန့်ကို OASIS ခေါ်သွားပြီး လက်ဖက်ရည်တိုက်၊ နောက်တော့ မွန့်ကို ကြည့်ပြီး ရယ်ပါလေရော။
`ကလေးလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ငိုတာ မရှက်ဘူးလား´
အဲဒီနေ့ကစလို့ ညနေတိုင်း သူလာခေါ်၊ ၈နာရီအဆောင်ပိတ်ချိန်မှ ပြန်။ မွန်တို့နှစ်ယောက်ကြား သံယောဇဉ်တွေ ဘယ်တော့မှ မပြတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ မွန်ထင်မိတော့တာပေါ့။
၃နှစ်နဲ့ ၁၀ရက်တိတိ ငယ်တဲ့ မွန်က ချာတိတ်လို့ ခေါ်တဲ့ သူဟာ မွန့်ကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ခွန်အားတွေပေးတယ်။ သူ့ကို စွဲလမ်းတွယ်တာရခြင်း၊ သူ့ကို ချစ်ရခြင်းများနဲ့ မွန်ဟာ မယုံနိုင်အောင် ပြောင်းလဲခဲ့တာပဲ။
မမလို့ သူခေါ်လိုက်တဲ့ ခဏတိုင်းမှာ သူ့အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်ခဲ့။ သူ့ကို ချစ်တဲ့အချိန်က စလို့ မွန်ဟာ မွန်မဟုတ်တော့ဘဲ သူဖြစ်သွားခဲ့။ သူ့ကို ချစ်မိတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ မွန်ဟာ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ခဲ့။
အဲဒီအချိန်အထိ မွန်သူ့နာမည်အရင်းကို မသိခဲ့ဘူး။ အိမ်နာမည်နဲ့ GTIကျောင်းသားဆိုတာကလွဲရင် သူ့အကြောင်း သူ့အိမ်အကြောင်း ဘာတစ်ခုမှ မစုံစမ်းခဲ့။ မသိချင်ခဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အရိပ်တွေကို ကြောက်တတ်ခဲ့သူလေ။ သူ့အပေါ် ချစ်နေခြင်းတစ်ခုသာ လိုအပ်ခဲ့ပြီး သူက မွန့်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ပြီးပြီပေါ့။ ဘာလိုသေးလဲ။ မွန်တို့အချစ်တွေကို အရောင်ပြောင်းစေမယ့် အရိပ်ထိုးမှုအားလုံးကို သစ္စာမဲ့စွာ ရှောင်ပုန်းနေတတ်ခဲ့တယ်။
မွန်ချစ်တဲ့သူဟာ ဂစ်တာတီးတဲ့ သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့ အနုပညာမြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ပဲ မဟုတ်လားကွယ်။ အနုပညာမြတ်နိုးသူရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဟန်ဆောင်လိမ်ညာခြင်းတွေ၊ မာယာတွေ၊ ကျောရရုံကြံတတ်တဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မရှိနိုင်လို့ တစ်ဖက်သတ် ယုံကြည်ခဲ့သူလေ။
`မွန့်ရဲ့ တစ်ဖက်သတ် ယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေပေါ့´
မွန့်လက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ပြီး သူပြောချိန်မှာ မွန့်ရင်က အချစ်တွေနဲ့ ညွှတ်နူးပျော့ပျောင်းလို့။ သူ့လက်ကို ပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ အနာဂတ်တွေ တောက်ပလင်းလက်လို့။ မွန်နဲ့သူ ရေနီမြောင်းအတိုင်း ၃၅လမ်း ဘက်အထိ လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ အပြန်ရေနီမြောင်းရဲ့ တံတားလေးတစ်ခုပေါ်မှာ ထိုင်ရင်းလရောင်နဲ့ တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ ရေနီမြောင်းရေပြင်ကို ပြိုင်တူငေးနေမိကြတယ်။ သူကလည်း တိတ်လို့၊ မွန်ကလည်း တိတ်လို့။ လရောင်ရဲ့ ဖမ်းစားမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သူ့ကို ချစ်တဲ့ ချစ်စိတ်သက်သက်နဲ့ သူ့ကို ချစ်တဲ့အကြောင်း မွန်ပြောပြမိတယ်။
မွန်က သူ့ကို ချစ်မိမှတော့ ဘာကို ထိန်းချုပ်ရဦးမတဲ့လဲ။ ဘာကို မျိုသိပ်ရဦးမတဲ့လဲ။ အချစ်ဟာ အချစ်ပါပဲ။ မပွင့်မလင်း အချစ်ထက် အခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အချစ်ကို မက်မောသူ မွန်က ဟန်မဆောင်ချင်ဘူးလေ။
မွန်တို့ အချစ်ညကလေးရဲ့ အမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ သူ့ကျောင်းကားကတ်ကလေးကို အပိုင်သိမ်းမိတော့ သူက ရယ်ရွှင်စွာ....
`ဘာလဲ အခုမှ စိုးရိမ်ပြီပေါ့။ ထွက်ပြေးရင် လိုက်ဖမ်းရအောင်လား´
`ဟင့်အင်း၊ မွန်လိုချင်တာ မောင့်ပုံရိပ်ကလေးကိုပဲ။ မိဘနာမည်တွေ၊ နေရပ်လိပ်စာတွေ မဟုတ်ဘူး။´
သူက သက်ပြင်းရှိုက်ရင်း မွန့်လက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ကာ....
`မမကို ပြောပြစရာရှိတယ်ကွာ။ သူများတွေ ပြောလို့ မမသိရမှာထက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပြောပြတာ ကောင်းတာပေါ့နော်´
မိန်းမတစ်ယောက်ကို နှစ်နှစ်နီးပါး အချစ်ကြီးကြီးနဲ့ ချစ်လာခဲ့ပြီးမှ အဲဒီမိန်းမရဲ့ ထားရစ်ခဲ့ခြင်းမှာ အချစ်တွေ ကုန်ဆုံးပြီလို့ ထင်ခဲ့သူတဲ့။ စိတ်လေလေနဲ့ ရည်းစားတွေ အများကြီးထားခဲ့ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်တတ်ခဲ့သူ။ ဆယ်ဂဏန်းနီးပါး ရည်းစားတွေထဲမှာ မမက နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သူတဲ့။
ဒါဆို မွန့်ကို ချစ်တယ် ပြောခဲ့တာတော့ကော။ ဟင့်အင်း... မွန်ဟာ သူ့အဖြေကို မကြားရဲဘဲ အတွေးထဲမှာပဲ မေးနေမိတယ်။ သူကလည်း ငေးမောရီဝေစွာနဲ့ အချစ်ဦးကို တမ်းတနေလေသလား။
`ကျွန်တော် မမကို ချစ်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်နဲ့ ထပ်တူကျလို့ ချစ်တာ။ စိတ်ချင်းတူလို့ကို ချစ်တာ။ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော် တွေးနေတာတွေ မမသိနေသလိုပဲ။ ပြီးတော့ အခုလို လရောင်အောက်မှာ လမ်းလျှောက်တာမျိုး၊ ရေနီမြောင်းအတိုင်းလေ။ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့်ကို ဂေါက်တစ်ယောက်လို သတ်မှတ်တာ ရယ်ကြတာ။ အခု မမနဲ့ကျမှ ကျွန်တော် မမကို ချစ်တယ်။ ဘယ်တော့မှ ခွဲမသွားဘူး။ မမကော...´
တိုးတိတ်ခိုင်မာတဲ့ သူ့ပစ္စုပ္ပန်စကားတွေမှာပဲ အရည်ပျော်ကျဆင်းရင်း သူ့အတိတ်တွေက တစ္ဆေတစ်ကောင်လို ခြောက်လှန့်ဆဲ။ ဒါပေမယ့် မွန်ဟာ လက်တွေ့ကျသူပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ မဟုတ်လားကွယ်။
`ဟင့်အင်း.. မောင့်အတိတ်ကို စိတ်မ၀င်စားဘူးကွာ။ မွန်ရော မောင်ရော ဘာမှ မတတ်နိုင်တဲ့ အတိတ်ကို ပြန်ပြောနေမယ့်အစား မွန့်ကို သစ္စာရှိပါ။ မောင့်ရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို ဝေမျှ ခံစားမယ့် ချစ်သူတစ်ယောက် မောင့်ဘေးမှာ ရှိနေပြီဆိုတာကိုပဲ မောင်သတိရပါ´
ကျွန်တော့်ဘ၀လေးဟာ မလက်ထဲမှာပဲ... ကျွန်တော့်ကို သနားရင် မရက်စက်လိုက်နဲ့ဦး.......
`မ´သီချင်းကို သူဆိုတဲ့အခါ သူ့အချစ်တွေကို ဂုဏ်ယူကျေနပ်ခဲ့စမြဲ။ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ မွန့်အချစ်တွေဟာလည်း တိုးလို့ ခိုင်မာလာမြဲ။ သူနဲ့တွေ့ခွင့် မရှိတော့တဲ့ ညအချိန်တွေမှာ သူ့အသံကို နားစွင့်ရင်း ချောင်းဆိုးနေတာ၊ ရေအကြာကြီးချိုးနေတာ၊ သူ့ဆီဖုန်းလာတာ၊ ညအရမ်းမိုးချုပ်မှ အိပ်တာ အားလုံးကို သိရှိနေတာ ဘာသာ ကျေနပ်တတ်မြဲ။
နံရံကလေးတစ်ချပ် ခြားတာကလွဲရင် သူဟာ မွန့်ဘ၀ပဲ မဟုတ်လားကွယ်။
မွန်က စက်ဘီးစီးရမှာ ကြောက်တတ်သူ။ အဲဒီတော့ မွန်တို့နှစ်ယောက် တမာပင်တွေအောက်၊ ကျုံးဘေး၊ ရေနီမြောင်းဘေး လရောင်အောက်မှာ လမ်းမီးတိုင်အလင်းရောင်အောက်မှာ ကျဲကျဲတောက်ပူနေတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ လက်တွဲလမ်းလျှောက်ရင်း တစ်သက်တာ မခွဲတမ်း ကတိတွေနဲ့၊ အချစ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာ။
အရာရာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မွန်နဲ့သူ့ရဲ့ အချစ်ရက်တွေထဲမှာ မွန်အကြောက်ဆုံးက သူ့သူငယ်ချင်းတွေ မွန်တို့ နှစ်ယောက်ကို တွေ့အောင်ရှာပြီး တွေ့ခဲ့ရင်လည်း အော်ဟစ်လှောင်ပြောင်တတ်သော၊ သူ့ကို မွန့်ထံမှ ခွဲထုတ်ဖို့ အပြစ်ရှာ မျက်ဝန်း မှေးမှေးတွေ ပိုင်ဆိုင်သော သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို မွန်က နည်းနည်းလေးမှ သည်းမခံနိုင်။
မွန်က သူနဲ့ သူ့အချစ်တွေက လွဲရင် အားလုံးကို မေ့လျော့ထားချင်သူ။ မွန်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သီးသန့်ဘ၀လေးမှာ ဘယ်လိုအရိပ်မျိုး၊ ဘယ်လိုစွက်ဖက်မှုမျိုးကိုမှ မလိုလားတတ်ခဲ့သူ။
သူ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ချစ်စနိုး ကျီစယ်ခြင်းထက် ကဲလွန်ပြီး ရက်စက်စွာ နောက်ပြောင်တတ်သူတွေ။
အချစ်ဆိုတာ ပြက်ရယ်ပြုစရာမှ မဟုတ်တာဘဲ မောင်ရယ်။ ပြီးတော့ မွန်တို့တွေက တစ်ခါမှ မသိဘူး၊ မခင်ဘူးကြသူတွေလေ။
အဲဒီလိုနဲ့ မွန်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ အစေးမကပ်ခဲ့။ မွန်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချိန်တွေကို ဖဲ့ယူဖို့ ကြိုးစားတတ်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို မွန်က ကြိုးစားပြီး ရှောင်တိမ်းတတ်ပေမယ့် မွန့်ရဲ့သူကတော့ မွန့်ကို OASIS မှာ မိနစ်၂၀လောက် ထားရစ်ခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းနောက် လိုက်သွားရက်သူလေ။
`သဘောထားသေးတဲ့သူတွေနဲ့ အတူနေရတာ မမိုက်ဘူး´
`မမနဲ့ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ မရှိတဲ့ နေရာမှာ နေမှ ရမယ်´
`နေပါဦး မောင်ရဲ့။ မောင့်သူငယ်ချင်းတိုင်းကို မွန်က အဲလို ဆက်ဆံလို့လား။ မောင် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ မောင့်ဆရာဆိုတဲ့ လူတွေဆို မွန်လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတာပဲ မဟုတ်လား။ အခုတော့ မွန်နဲ့လည်း မရင်းနှီးဘဲ သက်သက်မဲ့ လှောင်ပြောင်သရော်ချင်တဲ့ သူတွေကို မွန်က သဘောထား မကြီးနိုင်ဘူး´
`မမ မသိပေမယ့် သူတို့က မမကို သိတယ်´
`မောင့် သူငယ်ချင်းတွေက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လိုဆက်ဆံရတယ် ဆိုတာ သိပုံမပေါ်ဘူး။ မွန်မသိတဲ့ မောင့်သူငယ်ချင်းတွေကို သိလာအောင်ည်း မကြိုးစားချင်ဘူး။ အရာရာကို လှောင်ချင်သရော်ချင်တဲ့ လူတွေကို မုန်းတယ်။ မဆက်ဆံချင်ဘူး´
အဲဒီပြဿနာက မွန်တို့အတွက် နံရံကလေးတစ်ချပ် မဟုတ်ဘဲ တံတိုင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။
တစ်ရက် OASISက အရိပ်ကျတဲ့ ထိုင်ခုံကလေးမှာ စကားပြောလိုက်၊ ရယ်လိုက်၊ ငြင်းလိုက်နဲ့ ရင်ခုန် ပျော်မွေ့နေတုန်း....
`ဟေ့ကောင် ဖိုးသား၊ ဘယ်နှနာရီ ထိုးပြီလဲ။ ကျောင်းမသွားသေးဘူးလား´
ခပ်တင်းတင်း မျက်နှာပေးနဲ့ မွန်တို့ကို ခပ်စူးစူး စိုက်ကြည့်နေသူ... မွန့်ရင်ထဲက ဒေါသက အရှိန်ခပ်ပြင်းပြင်း ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့ မွန့်မျက်နှာကို ကြည့်ရင်း.......
`စိတ်မဆိုးပါနဲ့ မမရယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ချစ်လို့ ပြောတာပါ´
မွန်ကတော့ သူ့မျက်နှာကိုသာ စိုက်ကြည့်မိရင်း...
`မလိုဘူးလေ မောင်ရဲ့။ သူပြောစရာ စကားမှ မဟုတ်တာ။ မောင်က ကလေးပေါက်စနကလေးမှ မဟုတ်တာ။ ပြီးတော့ ဒါ ကျောင်းချိန်မဟုတ်သေးဘူး။ မွန်တို့ နှစ်ယောက်က ဘာတွေလဲဆိုတာ သူနားလည်ပေးရမှာပေါ့။ အဲဒါ မိုက်ရိုင်းတယ်လို့ ခေါ်တယ်´
`သြော်.. သြော်... This is called မိုက်ရိုင်းတယ်ပေါ့။ လာပါ မမရယ်။ အလကားနေရင်း စိတ်တိုမနေပါနဲ့။ Pink Night မှာ သီချင်းဆိုပြမယ်´
CD OK အခန်းငယ်ထဲမှာ မွန်သိပ်နှစ်သက်တဲ့ သူ့သီချင်းသံတွေကို မခံစားနိုင်လောက်အောင် မွန့်စိတ်တွေ တင်းကျပ်နေခဲ့တယ်။ မွန်နဲ့သူ့ကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ တံတိုင်းကြီးက ပိုပြီး ထူထဲခိုင်ခံနေခဲ့ပြီလေ။
မွန်ကြောက်တတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အရိပ်တွေ ဒါ ကံတရားမဟုတ်ဘူး မောင်ရေ။ လူတွေရဲ့ စီရင်ချက်တွေပဲ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး မွန်ရဲ့ အနာဂတ်ကို အနည်းငယ် ရိပ်မိနေသလိုလို။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြာရီအက်ကွဲတဲ့ သူ့သီချင်းသံတွေ၊ မမလို့ခေါ်တဲ့ သူ့အသံတွေအောက်မှာ မွန့်အသိဥာဏ်တွေ မှုန်ဝါးဝေသီကာ အဲဒီတံတိုင်းကြီးကို မေ့နေတတ်ပြန်ရော။
စက်ဘီးတိုက်မိတဲ့ နေ့ကစပြီး တစ်နေ့မပြတ် တွေ့နေခဲ့ရတဲ့ သူ့ကို ၅ရက်ပြည့်တဲ့အထိ မတွေ့ရ၊ အသံမကြားရ။ ဟင့်အင်း.... ဘာမှလည်း အဆက်အသွယ်မရ။ ရေကန်ဘက်ထွက်တဲ့ အဆောင်လမ်းကြားကလေးမှာ ထိုင်ပြီး မွန့်ညတွေ မိုးလင်းလုလု။
မောင်ရေ၊ အချစ်မှာ မာနမရှိ။ အတ္တမရှိ။ ဒါပေမယ့် ချစ်နေခြင်းတစ်ခုတော့ အသေအချာ လိုအပ်သည်လေ။
မွန့်စာကို သူဖတ်ပြီးပြီ။ လာသင့်ပြီလို ယူဆခဲ့ချိန် အထိ သူပေါ်မလာခဲ့။ လာမယ့်လာတော့လည်း...
`ကိုငယ်ခေါ်ထားလို့ မမရယ်။ သူ့ဆိုင်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိလို့။ အခုလည်း မလာရဘူးတဲ့။ မမစာထုတ်ပြမှ လာခိုင်းတာ။ ဒါတောင် အချိန်သိပ်မရဘူး။ ညနေ ၆နာရီဆို လူကျလာပြီ။ ကျွန်တော်ရှိနေမှ ဖြစ်မှာ´
`နေပါဦးမောင်ရဲ့။ မောင့်ကိုငယ်က အရေးကြီးသလား။ မွန်က အရေးကြီးသလား။ အခု မောင်နဲ့မွန် မတွေ့ရတာ တစ်ပတ်တိတိ ရှိပြီ။ မောင့်အကြောင်းပြချက်က ဒါပဲလား´
မွန့်မျက်ရည်တွေကို သူ့ပါးပြင်နဲ့ ထိကပ်ခြောက်သွေ့ စေရင်း....
`ကျွန်တော့်ကို နားလည်ပေးပါ မမရယ်။ ကိုငယ့်ကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ကျွန်တော့်မှာ ရှိတယ်။ မမသိရင် စိတ်ညစ်လိမ့်မယ်။ ပြောမပြချင်ဘူး။ ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်´
`မောင် မွန့်ကို နည်းနည်းမှ မညှာဘူး။ ဖုန်းတောင် ဆက်ပေါ်မရဘူး။ မွန်ဘာတွေ ခံစားနေရသလဲ မောင်မသိဘူး။ သိဖို့လည်း မကြိုးစားဘူးမဟုတ်လား´
`မမရယ် စားသောက်ဆိုင် ဆိုတော့လည်း ဖုန်းပြောရတာ မလွတ်လပ်ဘူး။ ကိုငယ်တို့ကလည်း အနားမှာ အမြဲရှိတာ´
မွန်တို့ စတွေ့ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈လကျော်ကတည်းက ညနေ ၈နာရီအဆောင်ပိတ်ချိန်မှ ပြန်တတ်တဲ့သူက အဲဒီ နေ့ကတော့ ညနေခင်း အလင်းရောင်အောက်မှာပဲ မွန့်ကို ထားရစ်ထွက်ခွာခဲ့တယ်။
အနေဝေးလို့ အေးစက်မာကျောသွားပေမယ့် အရာတွေထဲမှာ မောင့်အချစ်တွေကော ပါနေမလားလို့ တွေးတော စိတ်မောရုံပါပဲ။
ဒီတစ်ခါတော့ ၁၀ရက်တိတိ ကြာတယ်။ နောက်ဆုံးတွေ့ပြီး ၁၀ရက်မြောက် ညနေခင်းမှာ....
ဒါ မွန်တို့ အထမ်းအမှတ်။ မွန်တို့တွေ မသိကြခင်ကတည်းက သူတို့ တစ်အုပ်စုလုံး အော်နေကြ။ အရင်ကတော့ သူ အဲလို အော်လိုက်တိုင်း မွန့်ရင်ထဲမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်ပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ၊ ပျာလောင်ခတ်တတ်စမြဲ။
ဒီတစ်ခါ သူ့အော်သံကိုတော့ ငြိမ်သက်စါာပဲ လက်ခံဖြစ်တော့တယ်။ မွန့်ရင်တွေ လေးလံတင်းကျပ်လို့ အရင်လို မပျော်နိုင်။ သူနဲ့စသိပြီးကတည်းက တစ်စုံတရာပြောစရာရှိတိုင်း သူက အဲလိုအော်။ ဒါဆိုရင်မွန်က ရောက်ရာ အရပ်ကနေ ၀ါးကပ် ပေါက်ကလေးကို ပြေးလာတတ်စမြဲ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဆုံဖို့တို့၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့တို့ ချိန်းတတ်မြဲ။ အဆောင်မှူးကို ကြောက်တော့ စကားတော့ အကြာကြီးမပြောရဲဘူးပေါ့လေ။
မွန် ၀ါးကပ်ပေါက် ကလေးနားရောက်တော့...
`အ၀တ်တွေ ပြန်လာယူတာ။ မမ အသံမကြားရလို့ လှမ်းအော်ကြည့်တာ´
`အပြီး ပြန်လာတာ မဟုတ်ဘူးပေါ့´
`နောက် ၅ရက်ဆို အပြီးပြန်လာလို့ ရပြီ။ အဲဒီတော့မှ တွေ့မယ်နော်။ အခု ၅နာရီထိုးနေပြီ။ ၆နာရီကို ကျွန်တော် ပြန်သွားရမှာ။ အခု မမကို တွေ့လို့ အလွမ်းပြေသွားပြီ´
မွန် ချက်ချင်းလှည့်ထွက်လာခဲ့ပြီး အခန်းထဲမှာ ထိုင်နေမိတယ်။ ဘယ်လိုသဘောလဲ မောင်ရယ်။ မွန့်ကို ထည့်တွက်စရာမလိုဘူးလို့ ယူဆထားခဲ့တယ်ပေါ့။ ဘာကို နာကြည်းရမှန်း ၀မ်းနည်းရမှန်း မသိနိုင်အောင် ၀ိညာဉ်ကော ခန္ဓာပါ ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို။
`မမ စိတ်ဆိုးနေမှာ စိုးလို့။ မမက လိမ္မာပါတယ်၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။ ငါးရက်နေရင် ကျွန်တော် ပြန်လာလို့ရပြီ´
`ကိစ္စမရှိဘူး။ မောင်လာချင်တဲ့ အချိန်မှ လာ။ မွန့်ကို ထည့်မတွက်နဲ့။ မောင်စိတ်ညစ်နေရ လိမ့်မယ်´
`မမရယ် ကျွန်တော် ရှင်းပြပြီးပြီပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ အခက်အခဲရှိပါတယ်လို့´
` သူတို့ဆိုင်မှာ မောင်ရှိမှ ဖြစ်မှာတဲ့လား´
`ကျွန်တော် မလွန်ဆန်နိုင်လို့ပါ မမရာ်´
`ဒါ သွေးရိုးသားရိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ မောင့်ကိုလည်း မယုံချင်တော့ဘူး။ ကိစ္စမရှိဘူး။ မွန့်ကို ထားခဲ့တော့။ မောင့်လမ်း မောင်သွား´
`မမရာ... မမတွေးလိုက်ရင် တဆုံးပဲ´
`မောင် လွန်ဆန်လို့မရဘူးဆိုတာ ငွေရေးကြေးရေးလား´
`ဟုတ်တယ် ကျွန်တော့်အခက်အခဲမှန်သမျှ သူရှင်းပေးထားတာ မမကို ပြောဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဟိုတစ်ခါ လေလွင့်နေတုန်းကလည်း အခုလိုပဲ ဆိုင်မှာခေါ်ပြီး ထိန်းပေးထားတာ´
`ဘာ... ဒါဆို အခုမောင်က လွင့်နေတာပေါ့ ဟုတ်လား။ မွန်နဲ့မောင်ရဲ့ ကိစ္စမှာ သူတို့က ထိန်းပေးနေရတယ်ပေါ့။ ဒါဆို မောင်က မွန့်ကို ဘယ်လို သဘောထားနေသလဲ ပြောပါဦး။ မောင့်ရဲ့ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ်မှာလဲ´
`ကျွန်တော် စကားမှားသွားတာပါ မမရယ်။ အခုက သူတို့ တကယ်လိုအပ်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော် မမကို ချစ်တယ်။ မခွဲနိုင်ဘူး´
`မွန်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ငွေကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲရမယ့် ပြဿနာဖြစ်ရမယ်လို့ နည်းနည်းမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ မွန်ချစ်ခဲ့တာ ပကာသနတွေ ဓနဥစ္စာတွေ မပါဘူး။ ဂစ်တာတီးတဲ့၊ သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့၊ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အရိုးသားဆုံး အသန့်ရှင်းဆုံး ချစ်ခဲ့တာ။ မောင့်ဆီက အချစ်တစ်ခုကလွဲပြီး ဘာကိုမှ မလိုချင်ဘူး´
မွန့်ဆံပင်တွေကို ညင်သာစွာ သပ်တင်ပေးရင်း......
`လိမ္မာပါတယ်ကွာ။ မမကျေနပ်အောင် ကျွန်တော် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ပြော´
မွန်က တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲ ထိုင်နေမိတော့တယ်။
`သြော် မေ့နေတာ။ ဒီမှာ ကိုငယ်က ပေးလိုက်တာ။ ကျွန်တော့်ကို မဖတ်ရဘူးတဲ့။ မမကို ပေးလိုက်ပါတဲ့´
လွယ်အိတ်ထဲက ထုတ်ယူကမ်းပေးလာတဲ့ သူ့ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း စာအုပ်ကလေး၊ မွန်နဲ့သူနဲ့ တွေ့ကြတဲ့အချိန်တိုင်း အဲဒီစာအုပ်ကလေးရဲ့ နောက်ကျောမှာ မွန့်ခံစားချက်တွေ၊ အချစ်တွေကို ပုံဖော်ပေးနိုင်မယ် ကဗျာအပိုင်းအစ ကလေးတွေ ရေးပေးနေကျ။ သင်္ချာတွေ လေ့ကျင့်ခန်းပုံတွေ မွန့်ကဗျာတွေ သီချင်းစာသား အပိုင်းအစတွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ...
ဟိုတစ်နေ့က တွေ့တုန်းက မွန်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အခြေအနေကို လက်မခံနိုင်လောက်အောင် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ရေးပေးခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းကဗျာလေး။ အဲဒီကဗျာလေးရဲ့ အောက်မှာ...
အရပ်ရှည်သလို စိတ်လည်း ရှည်ရှည်ထားပါ။ မင်း ကိုးကွယ်တဲ့ အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး။ ကျုပ်တို့လို လောကကြီး အကြောင်း နောကျေနေတဲ့ ဆရာကြီးကို ပြစ်မှားတဲ့ အတွက် သေးသိမ်နိမ့်ကျ တဲ့ ယောက်ျားမျိုး နဲ့ပဲ တွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေ တယ်။
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း မွန်က အံ့သြမင်သက်စွာ ဒါအပြင်းထန်ဆုံး စော်ကားတိုက်ခိုက်မှု ပဲ။ ယောက်ျား တစ်ယောက်အတွက် မရှိသင့် မရှိအပ်တဲ့ စိတ်ထားတွေ၊ ရေးသားမှုတွေ။ ဒါ မောင့်သူငယ်ချင်း တဲ့လား။ နောက်ပြီး ချစ်သူနှဟ်ယောက်ကြားမှာ မစွက်ဖက်သင့်တဲ့ အပြုအမူပဲ။ ကိုငယ်ဆုတောင်းသလို မွန်က သေးသိမ်နိမ့်ကျတဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ ပတ်သက်မိပြီပေါ့။ ဟင့်အင်း... မယုံနိုင်။
ဒါဟာ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ စည်းကို ရိုက်ချိုးစိန်ခေါ်တာပဲ။ မွန်တို့ အခြေအနေကို မျက်ခြေပြတ်မခံ စပ်စုနေခဲ့တာကိုး။ မွန့်ချစ်သူရဲ့ စာအုပ်မှာ မွန်တို့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ ဘာရယ်မဟုတ် ရေးပေးမိတဲ့ ကဗျာလေးဟာ သူတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်။
သူတို့အတွက် ပေးလိုက်တဲ့ စာသားလည်းမဟုတ်။ ဒီလောက်ရင့်ရင့်သီးသီး တုံ့ပြန်စရာလို သလား။ ယောက်ျားတန်မဲ့ နှုတ်သီးေ ကာင်း လျှာ ပါး ဒီလောက် ထိ ၀င်ပြီး စွက်ဖက်တာ ဘာကြောင့်လဲ။
မောင်ဟာ ချစ်သူကို တန်ဖိုးထား ကာကွယ်ဖို့ထက် သူငယ်ချင်းကြိုးဆွဲရာ ကချင်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါလား။ ဘာလို့များ ချစ်တယ်ပြောခဲ့ရသလဲ မောင်ရယ်။
`မမရာ မမ ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ။ ကျွန်တော် တစ်ယောက်လုံး ဘေးမှာ ထိုင်နေတာရော သတိရသေးရဲ့လား။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမှာလဲ´
`မောင် လုပ်ချင်တာလုပ် မောင့်သဘောပဲ။ မွန်မတားဘူး။ သွားချင်လည်း သွား။ ဒါပေမယ့် သွားပြီဆိုရင် ပြန်လှည့် မကြည့် တမ်းနော်။ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာနဲ့။ ပြန်မဆက်သွယ်နဲ့´
`မမ သက်သက် အကျပ်ကိုင်တာပဲ´
`မောင်ထင်ချင်သလို ထင်လေ။ ကိုငယ်က မောင့်ကို ရက်တွေအကြာကြီး အပိုင်ယူထားပြီးပြီ။ ဒီတစ်ညနေလေး မသွားရုံနဲ့ သူတို့ဆိုင်ကြီး ပြုတ်မသွားပါဘူး´
`မဟုတ်ဘူးလေ ကိုငယ်က ကျွန်တော့ကို တစ်မျိုးထင်သွားမှာပေါ့။ မကောင်းဘူးလေ´
`ကိုယ့်ချစ်သူ တစ်ယောက်လုံးကို ရက်၂၀လောက် ပစ်ထား ဖုန်းတောင်မဆက်ဘူး။ အဲဒါကျတော့ ကောင်းတယ်ပေါ့။ ဒါ တမင်သက်သက် ကြိုတင်ကြံစည်တာ။ မောင့်ကိုလည်း မယုံတော့ဘူး။´
`ဟုတ်ပြီလေ မမက နေဆိုရင် နေမယ်။ ကိုငယ်နဲ့ ကျွန်တော် ပြဿနာဖြစ်ရင် မမဘယ်လိုနေမလဲ´
`လာပြန်ပြီ၊ ဒီ ကိုငယ်။ ဖြစ်စရာအကြောင်းကို မရှိဘူး။ ဖြစ်ရင်လည်း မွန်နဲ့မဆိုင်ဘူး´
`ကျွန်တော့် ပြဿနာ မမ ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့´
`ဒီပြဿနာမှာတော့ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး´
`ဒါဆို ကျွန်တော် သွားမယ်´
ချစ်သူကို အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့။ ချစ်သူဟာ ဘ၀၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် ဖြူစင်တဲ့ အချစ်သက်သက် ပါပဲ။ အရှုံးအမြတ် တွက်ချက်မှုမပါ။ မိဘဆွေမျိုး အင်အားပြမှုတွေ မပါ။
ကဲ.... သူ့ဆီမှာ မွန့်အတွက် အချစ်တွေမရှိဘူး ဆိုတာ သိလာခဲ့မှတော့ ရှေ့ဆက်ရဦးမလား။
မွန်ဟာ အချစ်အတွက်လည်း ပြတ်သားခဲ့တယ်။ အချစ်မရှိဘူးဆိုတာ သိလာရင်လည်း ပြတ်သားရဲရမှာပေါ့။
Good Bye မောင်ရေ...။
သူ အဆောင်လာတွေ့ရင် မွန် ထွက်မတွေ့ခဲ့။ သူ့အသံကြားရင် ဖုန်းချပစ်ခဲ့။ လမ်းမှာတွေ့ရင် ပြတ်တောက် စွာ ငြင်းပယ်ခဲ့။
ကိုငယ့်စကားအတိုင်း ပြောရရင် သေးသိမ်နိမ့်ကျတဲ့ ယောက်ျားတစ်စုရဲ့ လှည့်စားမှုက အောင်မြင်စွာ လွတ်မြောက်ခဲ့သူပေါ့။
အခုတော့ Final စာမေးပွဲတွေ ပြီးလို့ Field ဆင်းနေရပြီတဲ့။ မန္တလေးမြို့က ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီပေါ့။
ပြာမိုက်နေတဲ့ ကောင်းကင်မှာ လကလေးက တစ်ခြမ်းကွေးသာနေတယ်။ ဆွေးမြည့်နေတဲ့ ၀ါးထံရံကလေး ကို ကျော်ပြီး ကြည့်မိတော့ သူ့အခန်းကလေးက မှောင်မိုက်စွာ ငြိမ်သက်နေပြီပဲ။ ပိုင်ရှင်မရှိတော့ဘဲ အခန်းကျဉ်း ကလေးဟာ မွန့်လိုပဲ တိတ်ဆိတ်စွာ အထီးကျန်နေတာပေါ့။ ပြာရီအက်ကွဲတဲ့ သူ့သီချင်းသံတွေ ကို ပြန်လည်ကြားယောင်ရင်း တိုးတိတ်စွာ ကြေကွဲမိပြန်ရော။
လွမ်းစရာရှိရင် နာတာနဲ့ ဖြေရမတဲ့။ ရယ်စရာကောင်းတဲ့မွန်က အဲဒီနာစရာတွေကိုပဲ လွမ်းနေတတ်ရဲ့။
ကိုယ်ဆိုတယ်.... ဒီသီချင်းတွေနဲ့....... ရည်ရွယ်ပါတယ် မအတွက်ပဲလေ.... အကြင်နာတွေ ပြန်လာမှာလားကွယ်....... စောင့်နေမိတယ်...
ကားဂိတ်သွားခါနီး အချိန်ထိ ထပ်တလဲလဲ ဆိုနေတဲ့ သီချင်းကလေး။ သူငယ်ချင်းတွေ ဆွဲခေါ်တာကို ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါသွားရင်း `အရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ မမကြီး၊ ပြန်လာခဲ့မယ်´ အော်ဟစ်သွားခဲ့သူ။
လသာညတွေမှာ သူဆိုတဲ့ သီချင်းသံတွေနဲ့ ယစ်မူးရီဝေစွာ ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတာ အိပ်မက်မှ မဟုတ်ခဲ့ဘဲကွယ်။
ဘယ်ဘက်ရင်ခွင်က စူးစူးနင့်နင့် နာကျင်လာတော့ ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်မိတယ်။
Man Always Remember Lady Because Of Romance Only....
ယောက်ျားတွေဟာ အချစ်သက်သက်နဲ့ မိန်းမတွေကို သတိရနေတတ်သတဲ့။ ဟင့်အင်းကွယ်..... မောင့်အချစ်သက်သက်ကို မရခဲ့ဘူးလို့ တွေးထင်တဲ့အခါ....
နံရံတစ်ချပ်ရဲ့ ဒီဘက်ခြမ်းမှာတော့ မွန်ကလည်း တွယ်ငြိဖူးတဲ့ အချစ်တွေကို နာကျင်စွာ လွမ်းဆွတ်နေတတ်မြဲ။
(ရွှေအမြုတေ၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၆)